September 2015 ~ Htet Aung Kyaw
UCI Road World Championships 2015 ပွဲမှ မှတ်စုများ။
12:58 AM Htet Aung Kyaw No comments
UCI Road World Championships 2015 အမျိုးသား Pro တာဝေးပွဲ စလုိုဗက်ကီးယားမှ Peter Sagan အနုိုင်ရ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် Richmond မြို့မှာ သတင်း တပတ်ကြာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ UCI Road World Championships ၂၀၁၅ ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ပွဲစဉ် အမျိုးသား Pro တာဝေးပွဲ Elite Men - Road Race 261.4 km ကီလုိုပွဲမှာ နာမည်ကြီး တာတုိုဘုရင် Peter Sagan (Slovakia) က 6:14:37 နာရီနဲ့ တကိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ အုပ်စုလုိုက် ပန်းဝင်လာသူတွေထဲက Michael Matthews (Australia) နဲ့ Ramunas Navardauskas (Lithuania) တုို့က 0:00:03 စက္ကန့်စီလောက်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရသွားပါတယ်။
''ဒါဟာ ကျနော့်ဘ၀အတွက် အကြီးမားဆုံးအောင်ပွဲတခုပါ။ ကျနော် အတော်ကို ပျော်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင် (စပိန်ပွဲမှာ လဲပြိုပြီး ထွက်လုိုက်ရကတည်း က) Vuelta ကနေထွက်လာပြီးကတည်းက ၃ ပတ်လုံးလုံး ဒီပွဲအတွက် ပေးဆပ်ထားလုို့ပါ'' လုို့ ဆာဂန်ကပြောပါတယ်။
ဆာဂန်ဟာ ပွဲမစခင်ကတည်းက ပထမ ရနုိုင်သူအဖြစ် ထင်ကြေးပေးခံထားရ သူ ၁၀ ဦးထဲက တဥိးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပွဲကုို လွယ်လွယ်နဲ့ ရသွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုိုဆုိုးတာက သူရဲ့ စလုိုဗက်အသင်းဟာ အခြားနုိုင်ငံကြီးတွေက အသင်းတွေလုို ၆ ဥိးအပြည့်နဲ့ဝင်နုိုင်တာ မဟုတ်ပဲ သူရယ်၊ သူ့အကိုရယ်နဲ့ အခြားအသင်းဖေါ်တဦး စုစုပေါင်းမှ ၃ ဦးတည်းနဲ့ ၀င်ပြိုင်ရ တာပါ။ (အသင်းဖေါ်အရေးကြီးကြောင်းကိုတော့ စပိန်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာ ပြန်ဖတ်ရန်)။
Richmond မြို့ကို ၁၀ ပတ်ကျော် ပတ်စီးရတဲ့ 261.4 km ပွဲတလျောက် မုိုးရွာ လိမ့်မယ်လုို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့ ကံကောင်းစွာနဲ့ ဒီနေ့မုိုးမရွာခဲ့ပါ။ မနေ့ညက ရွာ ထားတဲ့မုိုးကြောင့်လမ်းတွေရေစုိုနေပေမဲ့ တာထွက်ချိန် မနက် ၉ နာရီနောက် ပုိုင်း တဖြေးဖြေးခြောက်သွေ့သွားတဲ့အတွက် ကြီးမားတဲ့ လဲပြိုမှု မဖြစ်ခဲ့ပါ။
တာထွက်ပြီး ကီလုို ၃၀ ၀န်းကျင်မှာ ၅ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု ၃ မီနစ် ကျော်အထိထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပေမဲ့ နောက်ပုိုင်းမှာ ပြန်မိသွားခဲ့ပါ တယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ပြေးနုိုင်တဲ့ Breakaway ကတော့ ပန်းဝင်ဖုို့ ၃ ပတ် အလုို ၄၅ ကိလုိုဝန်းကျင်မှာ Boivin, Phinney and Siutsou တုို့ပါ။
တခါ ပန်းဝင်ဖုို့ ၂ ပတ်အလို ကီလုို ၃၀ အလုိုမှာ လက်ရှိချန်ပီယံ ပိုလံနုိုင်ငံသား Kwiatkowski အပါင် ၇ ဦး ၃၀ စက္ကန့်ဝန်းကျင်အထိ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားပြန်ပါတယ်။ ချန်ပီယံပါ ပါနေတဲ့အတွက် Peloton က ပြန်ဖမ်းဖုို့မလွယ် တော့ဘူးဆုိုပြီး ထင်ခဲ့မိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သြစတေလျနဲ့ ဂျာမဏီအသင်းတွေအရှိန်တင်လုိုက်ရာကနေ နောက် ဆုံးအပတ်မှာ အားလုံးကို မိသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပတ် ခေါင်းလောင်း ထုိုးပြီး ၁၀ ကိလုိုဝန်းကျင်သာကျန်တော့တဲ့အချိန်ကျမှ နောက်ထပ် ၂ ဦး ၁၀ စက္ကန့်ကျော် တခါ လွတ်သွားပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပန်းဝင်ဖုို့ ၅ ကီလုိုအလုိုမှာတော့ အားလုံးတအုပ်တည်းဖြစ်သွားပြီး Sprinter တွေ အကြိတ်အနယ် ပြိုင်ရမယ်ဆုိုတာက ပွဲကတဖြေးဖြေး သရုပ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပထမ ရသွားသူ ပီတာဆာဂင်ဟာ ပန်းဝင်ခါနီးမှ အသားကုန်တင်တဲ့ နည်းကို မသုံးပဲ ကျောက်လုံး ကြမ်းတွေကိုကျော်ဖြတ်ရတဲ့ နောက်ဆုံးတောင် ကုန်းအတက် ပန်းဝင်ဖုို့ ၃ ကီလုိုလောက် ကတည်းက အသားကုန်တင်ပြီး ထွက်ပြေးပါတယ်။
တောင်ထိပ်ရောက်တဲ့အထိ လွတ်တယ်လုို့မဆုိုသာပါဘူး။ သူ့နောက်မှာ ၂ ဦး ကပ်ပါလာ တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကုန်းဆင်းမှာပါ အသားကုန် ထပ်ဆင်း လုိုက်တဲ့အခါ နောက်က ၂ ဦး မကပ်နုိုင်ပဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဆာဂန်ရဲ့ စက်ဘီးကျွမ်းကျင်မှု၊ ဒေါင့်ချိုးဒေါင့်ကွေ့တွေ၊ ကုန်းဆင်းမှာ အထူးသဖြင့် ကျောက်တုန်းတွေပေါ်ခုန်နေတဲ့ ဘီးကို ငြိမ်အောင် ကိုယ်ကိုဖိပြီး (ဘားတန်း ပေါ် ဆင်းထုိုင်ပြီး) လေဟုန်စီးတဲ့နည်းဟာ သူ့အတွက် အတော်အလုပ်ဖြစ်ပုံ ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလုိုင်လ Tour de France တုန်းကလည်း ဒီလုိုစီးကွက်အတွက် သူ နာမည်ကြီးခဲ့ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ကလုိုက်လာတဲ့ Peloton ကအရမ်း အရှိန်ကောင်းတဲ့အတွက် သူ့ နောက်က ကပ်ပါလာသူ ၂ ဦးကို ပန်းဝင်ဖုို့ မီတာ ၄၀၀ လောက်မှာ မိသွားပါတယ်။ သူ့ကို လည်း မိဖုို့ ၁၀ မီတာဝန်းကျင်ပဲလုိုပါတော့တယ်။
သူသာ အချိန်နဲ့ အရှိန်ကုို အသေချာ မတွက်တတ်ရင် (ပန်းဝင်စည်းအတွက် အားလဲ ချန်မထားမိဘူးဆုိုရင်) ဒီလုိုထွက်ပြေးပုံမျိုးဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ ၅ မီတာအလုိုလောက်မှ ကပ်တီး ခံရထားများပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကုို မိသွားမလားဆုိုပြီး ထင်မိပါ တယ်။ သူဟာ အသားကုန်မတင်ပဲ ပုံမှန်လေးပဲစီး ပြီး နောက်ပြန်ကြည့် အချိန်ကိုတွက်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာ နဲ့ သို့မဟုတ် သူ့အတွက်အချက်အတုိုင်း အားလုံးကွက်တိဖြစ်လျက် ၃ စက္ကန့် အသာနဲ့ ပထမ ရသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ ၁-၁၀ ရသွားသူတွေကတော့...
10 Philippe Gilbert (Belgium) တုို့ဖြစ်ပါတယ်။ ။
UCI အမျိုးသား လူငယ် တာဝေးပွဲ သြစတီးယားသား အနုိုင်ရ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် Richmond မြို့မှာ တနင်္ဂနွေ နေ့က စတင်ကျင်းပနေတဲ့ UCI Road World Championships ပြိုင်ပွဲ ၆ ရက်မြောက်နေ့ အမျိုးသားအငယ်တန်း တာဝေးပွဲ Junior Men - Road Race 129.8 km မှာ Felix Gall (Austria) က 3:11:09 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါ တယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Clement Betouigt-Suire (France) က နှာတဖျား နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Rasmus Pedersen (Denmark) က 0:00:01 စက္ကန့်နောက်ကျ ပြီး တတိယ ရသွားပါတယ်။
Richmond မြို့ကုိုပတ်ပြီးစီးရတဲ့ ၁၂၉. ၈ ကီလုိုပြိုင်ပွဲတလျောက် မုိုးရွာလုို့ လမ်းချော်မှုတွေဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပန်းဝင်တောင်ကုန်း ကျောက် တုံးကြီးတွေခင်းထားတဲ့လမ်းပေါ် စက်ဘီးသမားအတော်များများ လဲပြိုခဲ့ပါ တယ်။
ဒီနေ့ပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရသွားတဲ့လူငယ်တွေကတော့
1 Felix Gall (Austria) 3:11:09
2 Clement Betouigt-Suire (France)
3 Rasmus Pedersen (Denmark) 0:00:01
4 Reto Muller (Switzerland) 0:00:10
5 Martin Salomon (Germany)
6 Nicola Conci (Italy)
7 Mathias Norsgaard (Denmark) 0:00:13
8 Nathan Draper (Great Britain)
9 Marc Hirschi (Switzerland)
10 Pit Leyder (Luxembourg) 0:00:20 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီညနေမှာတော့ အားလုံးကမျော်နေတဲ့ အမျိုးသား Pro တာဝေးပွဲ Elite Men - Road Race 261.4 km ကီလုိုပွဲအကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ဖုို့ ရှိနေပါတယ်။ ။
UCI အမျိုးသမီး Pro တာဝေးပွဲ ဗြိတိန်သူ အနုိုင်ရ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် Richmond မြို့မှာ တနင်္ဂနွေ နေ့က စတင်ကျင်းပနေတဲ့ UCI Road World Championships ပြိုင်ပွဲ ၆ ရက်မြောက်နေ့ အမျိုးသမီး Pro တာဝေးပွဲ Elite Women - Road Race 129.8 km ပွဲမှာ Elizabeth Armitstead (Great Britain) က 3:23:56 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Anna Van Der Breggen (Netherlands) နဲ့ Megan Guarnier (United States Of America) တုို့က ကပ်လျက်ပန်းဝင်ပြီး ဒုတိယ နဲ့ တတိယ ရသွားပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ ၁-၁၀ ရသွားသူတွေကတော့
1 Elizabeth Armitstead (Great Britain) 3:23:56
2 Anna Van Der Breggen (Netherlands)
3 Megan Guarnier (United States Of America)
4 Elisa Longo Borghini (Italy)
5 Emma Johansson (Sweden)
6 Pauline Ferrand Prevot (France)
7 Katarzyna Niewiadoma (Poland)
8 Alena Amialiusik (Belarus)
9 Jolanda Neff (Switzerland)
10 Ellen Van Dijk (Netherlands) 0:00:09 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
UCI အမျိုးသား ၂၃ နှစ်အောက် တာဝေးပွဲ ပြင်သစ်နုိုင်ငံသား အနုိုင်ရ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် Richmond မြို့မှာ တနင်္ဂနွေ နေ့က စတင်ကျင်းပနေတဲ့ UCI Road World Championships ပြိုင်ပွဲ ၅ ရက်မြောက်နေ့ အမျိုးသား ၂၃ နှစ်အောက် တာဝေးပွဲ U23 Men - Road Race 162.2 km ကီလုိုပွဲမှာ Kevin Ledanois (France) က 3:54:45 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Simone Consonni (Italy) က နဲနဲလေး နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Anthony Turgis (France) က 0:00:02 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး တတိယ ရသွားပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ ၁-၁၀ ရသွားသူတွေကတော့..
10 Lennard Kamna (Germany) 0:00:12 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီညနေမှာတော့ အမျိုးသား အငယ်တန်း တာဝေးပွဲ Junior Men - Road Race 129.8 km နဲ့ အမျိုးသမီး Pro တာဝေးပွဲ Elite Women - Road Race 129.8 km ပွဲတွေ ရှိနေပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ အားလုံးကမျော်နေတဲ့ အမျိုးသား Pro တာဝေးပွဲ Elite Men - Road Race 261.4 km ကီလုိုပွဲရှိနေပါတယ်။ ။
UCI အမျိုးသမီးအငယ်တန်း တာဝေးပွဲ အမေရိကန်သူ အနုိုင်ရ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် Richmond မြို့မှာ တနင်္ဂနွေ နေ့က စတင်ကျင်းပနေတဲ့ UCI Road World Championships ပြိုင်ပွဲ ၅ ရက်မြောက်နေ့ အမျိုးသမီးအငယ်တန်း တာဝေးပွဲ Junior Women - Road Race Richmond 64.9 km ကီလုိုပွဲမှာ Chloe Dygert (United States Of America) က 1:42:16 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Emma White (United States Of America) က 0:01:23 မီနစ်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Agnieszka Skalniak (Poland) က 0:01:28 မီနစ်နောက်ကျနဲ့ တတိယ ရသွားပါတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Dygert နဲ့ ဒုတိယ ရသူ White တုို့ဟာ ပြိုင်ပွဲတ၀က်လောက်ကတည်းက လွတ်မြောက်သွားတဲ့ ၄ ဦးပါ Breakaway ထဲကဖြစ်ပြီး ပန်းဝင်တဲ့အထိ လွတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Dygert နဲ့ White တုို့ ၂ ဦးစလုံးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနလာင်္နေ့ကကျင်းပတဲ့ အမျိုး သမီးအငယ်တန်း တဦးချင်းစံချိန်ပြုပွဲမှာလဲ ရွှေနဲ့ ငွေ ရထားတဲ့အတွက် ဒါဟာ ဒုတိယ အကြိမ် ဆက်တုိုက် အောင်ပွဲရခြင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရသွားသူတွေကတော့ ...
1 Chloe Dygert (United States Of America) 1:42:16
2 Emma White (United States Of America) 0:01:23
3 Agnieszka Skalniak (Poland) 0:01:28
4 Yumi Kajihara (Japan) 0:01:41
5 Susanne Andersen (Norway)
6 Elisa Balsamo (Italy)
7 Grace Garner (Great Britain)
8 Yara Kastelijn (Netherlands)
9 Jessica Pratt (Australia)
10 Ida Jansson (Sweden) တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသား ၂၃ နှစ်အောက် တာဝေးပွဲ U23 Men - Road Race Richmond 162.2 km ကီလုိုပွဲကတော့ ကျင်းပနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ အသေးစိပ် ကို ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ အမျိုးသား အငယ်တန်း တာဝေးပွဲ Junior Men - Road Race Richmond 129.8 km နဲ့ အမျိုးသမီး Pro တာဝေးပွဲ Elite Women - Road Race Richmond - Richmond 129.8 km ပွဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ ။
UCI အမျိုးသား Pro တဦးချင်းစံချိန်ပြုပွဲ Belarus နုိုင်ငံသား အနုိုင်ရ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် Richmond မြို့မှာ တနင်္ဂနွေ နေ့က စတင်ကျင်းပနေတဲ့ UCI Road World Championships ပြိုင်ပွဲ ၄ ရက်မြောက်နေ့ အမျိုးသား တဦးချင်းစံချိန်ပြုပွဲ Elite Men - Individual Time Trial 53.5 km ကီလုိုပွဲမှာ Vasil Kiryienka (Belarus) က 1:02:29 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
Adriano Malori (Italy) က 0:00:09 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Jerome Coppel (France) က 0:00:27 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး တတိယ ရသွားပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲမစခင် TT နာမည်ကြီးတွေထဲက Rohan Dennis (Australia) ဟာ စီး နေရင်းနဲ့ စက်ဘီးအသစ်ပြန်လဲရတဲ့အတွက် အချိန် တမီနစ်နီးပါးနောက်ကျ သွားပြီး နံပတ် ၆ ဖြစ်သွားပါတယ်။
TT ချန်ပီယံ ၃ ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ Tour de France ပွဲတုန်းက အ၀ါ ရောင်အကျီရထားစဉ်မှာ လဲပြိုပြီး ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်သွားရသူ Tony Martin (Germany) လည်း တမီနစ်ကျော် နောက်ကျပြီး နံပတ် ၇ ဖြစ်သွားပါတယ်။
အခုလအစောပုိုင်းက စပိန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ VueltaaEspana ပွဲမှာခြေစွမ်းပြ ခဲ့သူ၊ TT ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သူ၊ ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးနေ့နားကျမှ အနီရောင်အကျီကုို စွန့်လုိုက်ရသူ Tom Dumoulin (Netherlands) လည်း တမီနစ်နီးပါး နောက် ကျပြီး နံပတ် ၅ ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့ TT ပွဲမှာ ၁-၁၀ ရသူ တွေကတော့...
1 Vasil Kiryienka (Belarus) 1:02:29
2 Adriano Malori (Italy) 0:00:09
3 Jerome Coppel (France) 0:00:27
4 Jonathan Nicolas Castroviejo (Spain) 0:00:30
5 Tom Dumoulin (Netherlands) 0:01:01
6 Rohan Dennis (Australia) 0:01:08
7 Tony Martin (Germany) 0:01:17
8 Marcin Bialoblocki (Poland) 0:01:22
9 Maciej Bodnar (Poland) 0:01:17
10 Moreno Moser (Italy) 0:01:32 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ နားရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၅ ရက်နေ့မှာတော့ အမျိုးသမီး အငယ်တန်း တာဝေးပွဲ Junior Women - Road Race Richmond 64.9 km ကီလုိုပွဲနဲ့ အမျိုးသား ၂၃ နှစ်အောက် တာဝေးပွဲ U23 Men - Road Race Richmond 162.2 km ကီလုိုပွဲတွေ ယှဉ်ပြိုင်ဖုို့ရှိနေပါတယ်။
၂၆ ရက်နေ့မှာတော့ အမျိုးသားလူငယ် တာဝေးပွဲ Junior Men - Road Race Richmond 129.8 km နဲ့ အမျိုးသမီး Pro တာဝေးပွဲ Elite Women - Road Race Richmond - Richmond 129.8 km ပွဲတွေရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးနေ့ ၂၇ မှာတော့ အားလုံးက စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရမဲ့ အမျိုး သား Pro တာဝေးပွဲ Elite Men - Road Race Richmond - Richmond 261.4 km ကီလုိုပွဲရှိနေပါတယ်။ ။
UCI Road World Championships TTT အသင်းလုိုက်စံချိန်ပြုပွဲ BMC အသင်း ဗုိုလ်စွဲ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် Richmond မြို့မှာ ဒီနေ့ စတင် ကျင်းပတဲ့ UCI Road World Championships ပြိုင်ပွဲ ပထနေ့ပွဲစဉ် TTT အသင်းလုိုက်စံချိန်ပြု အမျိုးသား Pro ပွဲစဉ်မှာ BMC အသင်းက ရွှေ တံဆိပ်ရသွားပါတယ်။
38.8km ကီလုိုမီတာကို 0:42:08 မီနစ်နဲ့စီးပြီး အခုလုို ပထမ ရသွားတာပါ။ Etixx - Quick-Step အသင်းကတော့ ၁၁ စက္ကန့်နောက်ကျပြီး 0:42:19 နဲ့ ဒုတိယ၊ Movistar Team အသင်းက ၃၀ စက္ကန့်နောက်ကျပြီး 0:42:38 နဲ့ တတိယ ရသွားပါတယ်။
Peter Sagan တုိုရဲ့ Tinkoff-Saxo အသင်းကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ် အချင်း ချင်း မတော်တဆချိတ်မိ ပြီး လဲချော်တဲ့အတွက် ပြန်ထ၊ ပြန်စုလုပ်နေရတာ ကြောင့် ၈ မီနစ်အထိနောက်ကျပြီး နောက်ဆုံး ပန်းဝင်တဲ့အသင်းဖြစ် သွားပါ တယ်။
1 BMC Racing Team 0:42:08
2 Etixx - Quick-Step 0:42:19
3 Movistar Team 0:42:38
Andrey Amador Bkkazakova
အမျိုးသားပွဲမတုိုင်မီကျင်းပတဲ့ အမျိုးသမီးအသင်းလုိုက် စံချိန်ပြုပွဲမှာတော့ Velocio - SRAM အသင်းက 0:47:35.70 မီနစ်နဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
1 Velocio - SRAM 0:47:35.70
မနက်ဖြန်မှာတော့ အမျိုးသမီး လူငယ်တန်း တဦးချင်းစံချိန်ပြုပွဲ Junior Women - Individual Time Trial 15 km ကီလုိုမီတာနဲ့ အမျိုးသား အသက် ၂၃ နှစ်အောက် တဦးချင်းစံချိန်ပြု U23 Men - Individual Time Trial 30 km ကီလုို ၃၀ ပွဲတွေကို ယှဉ်ပြိုင်ဖုို့ရှိနေပါတယ်။ ။
၂၇ နှစ် ကြာပြီးတဲ့အခါ...
5:42 AM Htet Aung Kyaw 1 comment
Friday, 18 September 2015. The Voice Daily.
(မနက်ဖြန်) စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ဟာ မိဘအိမ်ကနေ ကျွန်တော် ထွက်လာခဲ့တာ ၂၇ နှစ် ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့။ ထွက်လာတယ်ဆိုတာ တစ်ဦးတည်း အလည်ထွက်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတာကို မခံနိုင်လို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ ထားဝယ်မြို့ပေါ်မှာတင် ငါးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင် သေဆုံးသူ ၃၀၀၀ လောက်အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ သမိုင်းလေ့လာသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်ထိတော့ ဒီကိစ္စအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်အမတ်တွေဆီကလည်း ဒီကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ ပြောဆိုသံ မကြားရသေးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို မတရား သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းအပေါ် လုံးဝသည်းမခံနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေကတော့ သေနတ်နဲ့ ပစ်နေတဲ့ စစ်တပ်ကို ပါးစပ်နဲ့ အော်ပြောနေရင် ထပ်သေဖို့ပဲ ရှိတယ်။ လက်နက်ကို လက်နက်နဲ့ တုံ့ပြန်မှရမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ အဲဒီအာဏာသိမ်းပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ မိဘနေအိမ်တွေဆီကနေ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး နယ်မြေဆီ စတင် ထွက်ခွာခဲ့ပါတော့တယ်။
ထားဝယ်နယ် တစ်ခုတည်းမှာတင် အဲဒီညက မိဘအိမ်ကနေ ထွက်လာသူ ၂၀၀ လောက် ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ရေဖြူ၊ လောင်းလုံး၊ သရက်ချောင်း၊ ပုလောပါ ပေါင်းလိုက်တော့ ၅၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားအုပ်ကြီးဟာ အရှေ့ဘက်နယ်စပ်က KNU ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး တပ်ရင်း ၁၀ နယ်မြေ မင်းသမီးစခန်း (အခု ထီးခီးနယ်စပ်ဂိတ်အနီး) ဆီ ရောက်လာခဲ့ပေါ့။ မြိတ်၊ တနင်္သာရီ၊ ဘုတ်ပြင်းနဲ့ ကော့သောင်ဘက်က နောက်ထပ် ၅၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကတော့ KNU မောတောင်မြို့နယ် (အခု မောတောင်နယ်စပ်ဂိတ်) ဆီ ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
တနင်္သာရီတိုင်း တစ်ခုတည်းတင် ကျောင်းသား ၁၀၀၀ လောက် တောခိုခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ပြည်နယ်၊ တိုင်း ၁၃ ခုကနေ ဘုရားသုံးဆူ၊ သေဘောဘိုး၊ ကလက်ဒေး၊ သံလွင်၊ စောထ စသဖြင့် ထိုင်းနယ်စပ်စခန်းတွေ၊ တရုတ်နယ်စပ်နဲ့ အိန္ဒိယနယ်စပ် အသီးသီးဆီ ရောက်သွားတဲ့သူတွေကို အချိုးကျ တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီနေ့က မိဘအိမ်ကနေ ထွက်သွားခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားဦးရေ သောင်းနဲ့ချီ ရှိမယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာ မလိုပါဘူး။ ကျောင်းသားဆိုတာ ခြုံပြီးပြောတာပါ။ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာဝန်၊ ရှေ့နေ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ လယ်သမား စသဖြင့် လူစုံပါဝင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ လူတစ်သောင်းလောက် ပါဝင်တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး) ကို နောက်ထပ် တစ်လကျော်အကြာ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မဟာမိတ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ (အခု NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ ပြင်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေ) နဲ့ ပေါင်းပြီး DAB (ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ်) နဲ့အတူ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးထဲ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ငှက်ဖျားဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ သေဆုံးသွားသူ၊ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသူ၊ မဟာမိတ်နဲ့ နားလည်မှုလွဲပြီး လူပျောက်စာရင်း ဝင်သွားသူ၊ ဆင်းရဲကျပ်တည်းမှုဒဏ်၊ နားလည်မှု လွဲမှားခြင်း ဒဏ်တွေကို မခံနိုင်လို့ အိမ်ပြန်သွားသူတွေ ရာနဲ့ချီ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၆ နှစ်မြောက် ABSDF ရဲ့ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင် ကျဆုံး-သေဆုံးချည်းတောင် ၈၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။
၂၇ နှစ် ကြာပြီးတဲ့အခါ
ဒါက ၂၇ နှစ်ကြာ တော်လှန်ခရီးကြမ်းကို တစ်ကြောင်းဆွဲ ပုံဖော်ကြည့်တာပါ။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ စာတန်းထိုးသလိုမျိုး “၂၇ နှစ် ကြာပြီးတဲ့အခါ” လို့ စာတန်းထိုးလိုက်ရုံနဲ့ ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။ အနှစ်ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ အဲဒီလို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝကို နှစ်နဲ့ချီ ရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်၊ မြောက်ပိုင်းက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့နဲ့ အပစ်ရပ်ပြီး တောင်ပိုင်းက လက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေဆီ အစိုးရတပ်က အကြီးအကျယ် ထိုးစစ်ဆင်လာပြီးတဲ့နောက် ကျောင်းသားအတော်များများ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆီ ရောက်သွားကြပါတယ်။
အဲဒီကတစ်ဆင့် တတိယနိုင်ငံတွေဆီ ရောက်သွားကြတယ် ဆိုပါတော့။ ဒါက အများစု အခြေအနေကို ပြောတာပါ။ တချို့ကတော့ ABSDF အဖွဲ့ထဲမှာ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းနေပြီး အခု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးချိန်အထိ ပါဝင်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေ၊ အခြေအနေအရ မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထဲ ဝင်သွားရတဲ့ ရဲဘော်တွေ၊ မိဘအိမ်ဆီ တိတ်တဆိတ် ပြန်သွားရတဲ့ ရဲဘော်တွေ၊ ထိုင်း၊ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယနယ်စပ် တစ်လျှောက်မှာ ဖြစ်သလို ရုန်းကန်နေရဆဲ ရဲဘော်တွေလည်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေကနေ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး၊ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်မှာတော့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း စစ်တစ်ပိုင်း အစိုးရအဖြစ် အသွင်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ လက္ခာဏာတွေ အစိုးရဘက်က ပြသလာပါတယ်။ မင်းကိုနိုင်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ရာနဲ့ချီ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကျယ်ချုပ်ကနေ ပြန်လွှတ်ပေးပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နယ်စပ်တစ်ကြောရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အားလုံးနီးပါးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ စလုပ်ပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ နယ်စပ်နဲ့ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း အိမ်ပြန်လာကြဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ကိုယ်တိုင် ဥရောပနဲ့ အမေရိကား ရောက်စဉ်မှာ တရားဝင် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုမိုးသီးဇွန်နဲ့ ဒေါက်တာနိုင်အောင် အပါအဝင် ပြည်ပရောက် ကျောင်းသားဟောင်းတချို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလထဲ မြန်မာနိုင်ငံဆီ လေ့လာရေးအဖြစ် ပြန်သွားကြပါတယ်။ ၂၀၁၃ နှောင်းပိုင်းမှာတော့ စာရေးသူ အပါအဝင် အတော်များများ “ပြည်တော်ပြန်” လေ့လာရေးခရီး လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ABSDF အဖွဲ့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ ရက် နေ့၊ ၈ လေးလုံး ၂၅ နှစ်ပြည့် မတိုင်ခင်လေးမှာ အပစ်ရပ်လက်မှတ် ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုပြန်လည်ခွင့်ရတာ၊ ဒီလိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာ ၂ နှစ်ကျော် သုံးနှစ်နီးပါး ရှိလာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် သေချာတဲ့ အာမခံချက်တော့ ဘာမှမရသေးပါ။ ABSDF အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်တိုင်ကတော့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူ NCA တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပါဝင်နေတဲ့အတွက် အခြေအနေဟာ ရှေ့ကိုသွားနေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ ပြည်ပကနေ ပြန်သွားပြီး လေ့လာရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ၊ ကျောင်းသားဟောင်းတွေကတော့ ပြည်တွင်းမှာ ပြန်လည်အခြေချ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားခွင့် မရသေးပါဘူး။ ကိုမိုးသီးဇွန်နဲ့အတူ ပါသွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေထဲက အနည်းဆုံး နှစ်ဦးဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈-က-၂ (ပြည်တွင်းမှာ အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်ဆက်တိုက် နေထိုင်သူ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မ) နဲ့ ငြိစွန်းနေတဲ့အတွက် နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ကော်မရှင်က ငြင်းဆိုခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ကိုမိုးသီးဇွန် ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းဖို့ နေနေသာသာ သူ့မိဘအိမ်ဆီ ပြန်လည်ခွင့် ဗီဇာကိုတောင် အစိုးရဘက်က ပိတ်ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက တတိယနိုင်ငံကနေ ပြန်သွားတဲ့ ပြည်တော်ပြန်တွေ ကိစ္စ။ နယ်စပ်ကနေ ပြန်သွားသူတွေကျတော့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ပုဒ်မက နောက်တစ်မျိုး။ တရားမဝင် အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့အတွက် (NCA မှာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ ပြင်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့ အတွက်) ပုဒ်မ ၁၇-၁ နဲ့ ငြိနေတာကြောင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့် ငြင်းပယ်ခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းများ
၈၈ မျိုးဆက်လို့ ပြောလိုက်ရင် မင်းကိုနိုင်နဲ့ ကိုကိုကြီးတို့ အဖွဲ့ကိုချည်း လူတွေက ပြေးမြင်လေ့ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီမျိုးဆက်က ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်နဲ့ မြေအောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲ ရောက်သွားကြတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ရဲ့ ဗကသအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ပါတီထောင်လိုက်တဲ့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DPNS ဝင် လူငယ်တွေ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးထဲ ရောက်သွားတဲ့ ABSDF ရဲဘော်တွေနဲ့ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတိုင်းနဲ့ အကျုံးဝင်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရကို ခါးခါးသီးသီး ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ ဒီမျိုးဆက်ဟာ အခု ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်တစ်ပိုင်း အစိုးရကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်အနေနဲ့ သီးခြားဝင်တာမျိုး မတွေ့ရသေးပေမယ့် NLD မှာ ဒီမျိုးဆက်က လူတွေ အခိုင်အမာ ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ NLD တင် မကပါဘူး။ အခြားပါတီငယ်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလတွေထဲမှာလည်း ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံအတွင်း ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ မနည်းလှပါ။
ဒါပေမဲ့ ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ နယ်စပ်နဲ့ ပြည်ပကနေ ပြန်လာတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေကတော့ ပုဒ်မ ၁၇-၁ (လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်မှု) နဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ၁၀ နှစ်ဆက်တိုက် နေထိုင်ခြင်း မရှိဘူးဆိုတဲ့ ပြစ်မှုတွေကို ကျူးလွန်မိတာကြောင့် နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲဆီ နီးကပ်ခွင့် မပေးနိုင်ဘူးလို့ ကော်မရှင်ရဲ့ ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံလိုက်ကြရပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီဥပဒေတွေဟာ လက်ရှိလွှတ်တော်က အတည်ပြုထားတာလား၊ အရင်စစ်အစိုးရ ခေတ်ကတည်းက ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေလား၊ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု လုပ်တဲ့အခါ ဒီဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ မကြိုးစားကြဘူးလား၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစု အားလုံး ပါဝင်ခွင့်ရရေး ဆိုတာနဲ့ ဒီလိုတစ်ဖက်သတ် ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေဟာ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု ရှိရဲ့လားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။
ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်တော့ ဘာမှမတတ်နိုင်။ အာဏာသုံးရပ်စလုံးက သူတို့လက်ထဲမှာချည်းပဲ ရှိနေဆဲဆိုတော့ ဘယ်နေရာသွားပြီး မေးခွန်းထုတ်မှာလဲ။
ဒီတော့ ကိုယ်ဘာသာပဲ မေးခွန်းထုတ်ပါရစေတော့။ ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် နော်ဝေနိုင်ငံဆီ ရောက်လာစဉ် ပြည်ပရောက်နေသူတွေ အားလုံး တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာ ပါဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အမိနိုင်ငံဆီ ပြန်လာကြစေလိုကြောင်း နှုတ်နဲ့ တရားဝင် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်တာအတွင်း သုံးခေါက် ကျွန်တော် ပြန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပထမတစ်ခေါက် ပြန်စဉ်က ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံကာလအတွင်း ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာ ကျွန်တော်နဲ့အတူ တာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ ရဲဘော်တစ်ဦး တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှာ ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အခု ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ရွာတည်း အတူတာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးသူ ရဲဘော်တစ်ဦးက အမတ်လောင်းအဖြစ် အခု မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေ စနေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်က သူတို့နဲ့အတူ လှုပ်ရှားခဲ့ဖူးတဲ့၊ သူတို့ထက်ပိုပြီး တက်ကြွလွန်သွားလို့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးထဲ ရောက်သွားမိတဲ့ ပြည်တော်ပြန်တွေ၊ နယ်စပ်ပြန်တွေကတော့ အခုဇာတ်ပေါင်းချိန် ရောက်တဲ့အခါမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေ၊ တစ်ဖက်သတ် စည်းမျဉ်းတွေရဲ့ အပြင်ဘက်မှာရပ်ရင်း ဒီတိုင်းပဲ ကြည့်နေရတာ့မှာလား။ တစ်စုံတစ်ရာ ဝင်ရောက် ကူညီဆောင်ရွက်ခွင့် မရနိုင်တော့ဘူးလား။
ဒါမှမဟုတ် အခုမြင်နေရတဲ့ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံအတွင်း ပါဝင်ခဲ့သူတွေ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအတွင်း ပေးဆပ်ခဲ့သူတွေ၊ ပြည်ပနိုင်ငံ အသီးသီးကနေ စစ်အစိုးရကို ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်လို့ စိတ်ဖြေရင်း ကျေနပ်နေသင့်သလားလို့ ကိုယ်ဘာသာ မေးခွန်းထုတ်နေမိပါတယ်။
- See more at: http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/perspective/item/8323-nsk#sthash.lifuxSnp.dpuf
VueltaaEspaña စက်ဘီးပွဲ ၂၁ ရက်စာ စာစုများ။
2:24 AM Htet Aung Kyaw No comments
VueltaaEspaña စက်ဘီးပွဲ ပထမနေ့ MBC အသင်း အနုိုင်ရ။
ဒီနေ့ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ စတင်လုိုက်တဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ်၂၁ ရက်ကြာ စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ VueltaaEspaña ရဲ့ ပထမနေ့ပွဲစဉ် TTT (Team Time Trial) အသင်းလုိုက်စံချိန်ပြုပွဲမှာ BMC Racing Team အသင်းက 0:08:10 မီနစ်နဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
Tinkoff-Saxo အသင်းနဲ့ Orica GreenEdge တုို့က 0:00:01 စက္ကန့်နီးပါး နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ဖြစ်သွားပါတယ်။ စာရေးသူဟောကိန်းထုတ် ခဲ့တဲ့ GC ဆရာကြီးတွေပါတဲ့ Movistar က 0:00:24 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး နံပတ် ၉၊ Astana အသင်းက 0:00:30 နောက်ကျပြီး နံပတ် ၁၃ နဲ့ Team Sky က 0:01:11 နောက်ကျပြီး နံပတ် ၂၀ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဟောကိန်း လုံးဝ လွဲသွားပါတယ်။
ဒီနေ့စတင်တဲ့ Porto Banus ကနေ Marbella အထိ 7.4 km TTT (အသင်းလုိုက်စံချိန်ပြုပွဲ)ရဲ့ ၇.၄ ကီလုို ပြေးလမ်း တလျာက်မှာ လက်လုပ်သစ်သားတခု၊ ဖုန်ထူတဲ့မြေနီးလမ်းတွေ၊ သဲခင်း လမ်းတွေ၊ ရော်ဘာပြားခင်းထားတဲ့လမ်းတွေ၊ ကွပ်ပျစ်ပေါ်တက်ပြီး ပန်းဝင်ရမဲ့ လမ်းတွေပါနေတဲ့အတွက် တနာရီ ကီလုို ၅၀ ကျော် အရှိန်တင်စီးရမဲ့ စက်ဘီး သမားတွေအတွက် အန္တရယ်များလှကြောင်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပေမဲ့ ကံကောင်း ထောက်မစွာနဲ့ ထိခုိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိပဲ ပွဲပြီးသွားပါတယ်။
''ကမ္ဘာ့ TTT Team Time Trial ချန်ပီယံအသင်းတခုအနေနဲ့ အခုလုို အနုိုင်ရ တာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာ အတော်ခက်ခဲတဲ့ပွဲတခုပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျ နော်တုို့အသင်းသားအားလုံး ဒါကိုကျော်ဖြတ်နုိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်'' လုို့ BMC Tejay van Garderen က ပန်းဝင်ပြီးမှာ မီဒီယာတွေကုိုပြောခဲ့ပါတယ်။
BMC အသင်း အခုလုိုအနုိုင်ရသွားတဲ့အတွက် အသင်းသား ၅ ဦးထဲက ပထမ ဆုံးပန်းဝင်သူ Peter Velits ဟာ ပထမ ဆုံး အနီရောင်အကျီရသူ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရတဲ့ အသင်းတွေကတော့...
1 BMC Racing Team 0:08:10
4 Team LottoNL-Jumbo 0:00:08
5 Etixx - Quick-Step 0:00:10
6 Trek Factory Racing 0:00:11
7 Lotto-Soudal 0:00:18
8 Caja Rural-Seguros RGA
9 Movistar 0:00:24
10 Cofidis, Solutions Credits 0:00:27 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲလမ်းကြောင်းအခြေအနေပေါ် ကန့်ကွက်မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဒီနေ့ပွဲက ရတဲ့ အချိန်ကို အသင်းလုိုက်အတွက်သာယူပြီး တဦးချင်းရမှတ်ထဲ ထည့်မပေါင်းခဲ့ ပါ။ မနက်ဖြန်ကျမှ တဦးချင်းအတွက် အချိန်တွေကိုစတင် မှတ်တမ်းတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Alhaurin de la Torre ကနေ Caminito del Rey အထိ 158.7 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ဒုတိယနေ့ Esteban Chaves အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ဒုတိယနေ့ ပွဲစဉ်မှာ Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge က 3:57:25 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin က 0:00:01 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Nicolas Roche (Irl) Team Sky က 0:00:09 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး တတိယ ရသွားပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ ပထမ ရတဲ့ ကုိုလံဘီယာနုိုင်ငံသား Esteban Chaves ဟာ ၂ ရက် ပေါင်း ပထမ သုို့မဟုတ် မနေ့က အသင်းလုိုက်ရတဲ့ စံချိန်ကို တဦးချင်းမှာ ထည့်မပေါင်းပဲ ဒီနေ့ ကနေ စရေတွက်တဲ့အတွက် အနီရောင်အကျီကုိုပါ ရသွားခဲ့ပါတယ်
Alhaurin de la Torre ကနေ Caminito del Rey အထိ 158.7 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲ တလျောက် တာလွှတ်တာနဲ့အရှိန်တင်ထွက်ပြေးကြပြီး ၂ ကီလုိုမီတာအတွင်းမှာတင် လဲပြို မှုတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လဲပြိုသူ ၂ ဦးထဲကတဦး ဆက်မစိးနုိုင်တော့တဲ့အတွက် ပထမ ဆုံး ပြိုင်ပွဲကထွက်ရသူဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကီလုို ၂၀ ခန့်မှာတော့ ၆ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး ၃ မီနစ် ကျော်ကျော်အထိ Peloton ကုိုဖြတ်ထားနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၀၈ ကီလုိုမီတာရှိ ပထမ တောင်ကုန်း တက်တဲ့အထိ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့က လွတ်မြောက်နေဆဲပါ။
ဒါပေမယ့် Movistar နဲ့ Katusha အသင်းတုို့က တလှည့်စီအရှိန်တင်လုိုက်ပြီး Gap ကုို တမီ နစ်ဝန်းကျင်သာ ကျန်တော့တဲ့အထိ ဆောင်ရွက်နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ Breakaway အဖွဲ့ကုို Peloton က ဖမ်းမိသွားလိမ့်မယ်လုို့ထင်နေတုန်း ပန်းဝင်ဖုို့ကီလုို ၃၀ ၀န်းကျင် အလုို မှာ ကြီးမားတဲ့လဲပြိုမှုတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလဲပြိုမှုအတွင်း GC အတွက် နာမည်ကြီးတွေထဲကတဦးဖြစ်သူ Vincenzo Nibali ပါသွား ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Astana အသင်းဖေါ် Paolo Tiralongo ဆုိုရင် မျက်နှာမှာ ဒဏ်ရာအတော် ပြင်းပြင်းရသွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Peloton ကုိုပြန်မီအောင် သူတုို့ နှစ်ဦး လုိုက်လာ နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Cyril Gautier (Europcar) ကအရှိန်တင်ထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့ GC ရမယ်လို့ထင်ကြေးပေးခံထား ရသူ Movistar အသင်းက Quintana က ပန်းဝင်ဖုိုပ ၃ ကီလုိုအလိုမှာ အမိပြန်ဖမ်းနုိုင်ခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အခု ပထမ ရသွားတဲ့ Chaves က Peloton နဲ့ နဲနဲဝေးတဲ့အထိ တဦးတည်းထွက်ပြေးနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
10 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:47 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးဝင်လာတဲ့သတင်းတပုဒ်အရဆုိုရင်တော့ ကီလုို ၃၀ အလုို မဟာလဲပြိုမှု အတွင်းဒဏ်ရာရခဲ့သူ GC နာမည်ကြီး၊ Tour de France မကျေပွဲအဖြစ် Christopher Froome (GBr) Team Sky ကုိုစိမ်ခေါ်ထားသူ Astana အသင်းခေါင်းဆောင် အီတလီနုိုင်ငံ သား Vincenzo Nibali ဟာ ပွဲပယ်ခံလုိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
လဲပြိုမှုအတွင်းနောက်ကျကျန်ခဲ့လုို့ ရှေ့က Peloton အုပ်စုကို မီအောင်လုိုက်စဉ်မှာ အသင်း ကား (အသင်းကားကပေးတဲ့ ရေဗူးကုို) ကို လက်နဲ့ကုိုင်ထားတဲ့အချိန် မီတာ ၁၀၀ ကျော်တဲ့ အထိရှိတဲ့အတွက် အခုလုိုအပြစ်ပေးခံလုိုက်ရ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုိုကုိုင်ထားတာကုို ဗီဒီယုို အနှေးပြကွက်တွေမှာ ထင်ရှားစွာမြင်ခဲ့ရတယ်လုို့ ဒုိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Mijas ကနေ Málaga အထိ 158.4 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ် ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña တတိယနေ့ Peter Sagan အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ တတိယနေ့ ပွဲစဉ်မှာ တာတုိုဘုရင် Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo က 4:06:46 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
ဒါဟာ Tour of California ပွဲပြီးကတည်းက၊ အထူးသဖြင့် Tour de France ပွဲစဉ်တွေမှာ မောင်ဒုတိယအဖြစ် နာမည်တွင်ခဲ့သူ ဆာဂင်အတွက် ၃ လနီးပါး တာကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပထမ ရခြင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits နဲ့ John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin တုို့က နှာတဖျားစီနောက်ကျ ပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရပါတယ်။
အမှန်တုိုင်းပြောရရင်တော့ အဲဒီလူတွေကနောက်ကျတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့ဆုံး မှာပြေးပြီး အရင်ဆုံး Sprint တင်သူတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဆာဂင်က နောက်ကနေကပ်လုိုက်ပြီး ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၀ မီတာလောက်အလုိုမှာမှ အချိန်ကုိုက် ကပ်တီးထည့်လုိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင်ကတော့ အပြောင်းအလဲမရှိပါဘူး။ မနေ့က အနီရောင်ရထားသူ Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge ကပဲ ထိမ်းထားနုိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Mijas ကနေ Málaga အထိ 158.4 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲအတွင်း အဓိကတောင် ၂ လုံးနဲ့ အတူ ပန်းဝင်တောင်ကုန်းတခုပါဝင်ပါတယ်။ အစဉ်အလာအားဖြင့် Breakaway သာမပြတ် ဘူးဆုိုရင် Sprinter တွေ ရနေကြလုို့ဆုိုပါတယ်။
ပွဲစတင်ကျင်းပတဲ့နေ့က လမ်းဆုိုးလုို့ဝေဖန်ခံရမှု၊ တခါ မနေ့က အသင်းကားကုို ဆွဲပြီးလုိုက် တဲ့အတွက် အီတလီက နာမည်ကြီးစက်ဘီးသမား နီဘာလီ အထုတ်ခံရမှုတွေနဲ့ ဒီနေ့ပွဲကို စတင်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ Mijas မြို့ထဲကနေထွက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာကတည်းက အရှိန်တင် ပြေးကြပြီး ၈ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု ၃ မိနစ်ကျော်အထိ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီထက်ပုိုမပြတ်အောင် Peloton က ထိမ်းပြီးလုိုက်နေစဉ်မှာ မနေ့ကလဲပြိုမှုအတွင်း ဒဏ်ရာ ခပ်ပြင်းပြင်းရထားသူ Paolo Tiralongo (Astana) က ကီလုို ၄၀ လောက်စီးအပြီးမှ ပွဲကနေ ထွက်ပြီး နားလုိုက်ပါတယ်။
ပထမ တောင်ကုိုကျော်အပြီး ပန်းဝင်ဖုို့ ၄၄ ကိလုိုမှာတော့ လဲပြိုမှုတခုဖြစ်ခဲ့ပြီး မနေ့က လဲပြိုမှု အတွင်းပါဝင်သူတွေဖြစ်တဲ့ Nacer Bouhanni နဲ့ Daniele Bennati တုို့ ပါသွားပါတယ်။ ဒါပေ မဲ့ မနေ့ကလုိုပဲ Peloton ကုိုမီအောင်လုိုက်လာနုိုင်တဲ့အပြင် ဒုတိယ တောင် ရလုိုက်ပါသေး တယ်။
ပန်းဝင်ဖုို့ ၅ ကိလုိုဝန်းကျင်မှာတော့ Breakaway တွေအားလုံးကို Peloton က ဖမ်းမိသွားပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အခြေအနေဟာ Sprint တင်ပြီး အနုိုင်ယူရတော့မယ်ဆုိုတာ သေချာသွား ပါပြီ။
Giant-Alpecin အသင်းကနေ Degenkolb ပထမရစေဖုို့ ရှေ့ကနေဦးဆောင် အရှိန်တင်စီးခဲ့ ပေမဲ့ ပန်းဝင်ဖုို့ မီတာ ၁၀၀ ၀န်းကျင်အလုိုမှာမှ ပီတာဆာဂင်က အသားကုန် Sprint တင်ပြီး အခုလုို အနုိုင်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
၃ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
General classification after stage 3# Rider Name (Country) Team Result
1 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 8:04:01
5 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:00:35
6 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:36
7 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:00:38
8 Christopher Froome (GBr) Team Sky 0:00:40
မနက်ဖြန်မှာတော့ Estepona ကနေ Vejer de la Frontera အထိ 209.6 km ကီလုိုမီတာ ကိုဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်ပွဲဟာလည်း Sprinter တွေအတွက် အခြေအနေကောင်းနုိုင်တာကြောင့် အောင်ပွဲငတ်မွတ်နေသူ Peter Sagan အတွက် ဒုတိယ အကြိမ် ဆက်တုိုက်အောင်ပွဲရနုိုင်တယ်လို့ Cyclingnews က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၄ ရက်မြောက်နေ့ Alejandro Valverde အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၄ ရက်မြောက်နေ့ ပွဲစဉ်မှာ GC နာမည်ကြီး တဦးဖြစ်သူ Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team က 5:07:30 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ မနေ့ကပွဲမှာ ပထမရခဲ့သူ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo နဲ့ Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha တုို့က နဲနဲစီ နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယရပါတယ်။
Tour de France ပွဲမှာတုန်းက တတိယ ရခဲ့သူ Alejandro Valverde (Spa) ဟာ ဒီနေ့ ပထမ ရတဲ့အတွက် GC နံပတ် ၅ နေရာအထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနီရောင် အကျီကုိုတော့ Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge က ၂၈ စက္ကန့်အသာနဲ့ ထိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Estepona ကနေ Vejer de la Frontera အထိ 209.6 km ကီလုိုမီတာ ပြိုင်ပွဲဟာ သတင်း ၃ ပတ်အတွင်း တာအဝေးဆုံးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ခရီးဝေးပေမဲ့ တာထွက်ပြီး ၄ ကီလုိုမှာ ကတည်းက ၆ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့ဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့အရှိန်အတော်ကောင်းခဲ့ပြီး တာထွက်ချိန် ကိလုို ၃၀ အတွင်းမှာတင် ၁၃ မီနစ်အထိ Peloton ကုို ဖြတ်ထားနုိုင်လုိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အနီရောင်အကျီပုိုင် ရှင် Esteban Chaves ရဲ့အသင်း Orica-GreenEdge ဟာ Katusha နဲ့ Movistar အသင်း တွေနဲ့ပေါင်းပြီး Gap ကျဉ်းနုိုင်သမျှကျဉ်းအောင် အရှိန်တင်လုိုက်ကြပါတယ်။
ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၁၀၀ ၀န်းကျင်ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့ Gap တ၀က်လောက်အထိကျလာပြီး ၆ မီနစ်ပဲကျန်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပုိုင်းမှာတော့ အစိမ်းရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Peter Sagan ရဲ့ Tinkoff-Saxo အသင်းက ဦးဆောင်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ပန်းဝင်ဖုို့ကီလုို ၃၀ ၀န်းကျင်မှာ တော့ လဲပြိုမှုတခုဖြစ်ပွါးခဲ့ပြီး GC နာမည်ကြီး Tejay van Garderen (BMC) အပါဝင် အ တော်များများဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။
ဒီလုိုပြိုလဲမှုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Peloton ရဲ့အရှိန်ကကျမသွားပဲ Breakaway ကိုမီဖုို့ ၁ မီနစ်ဝန်းကျင် သာလုိုပါတော့တယ်။ ပန်းဝင်ဖုို့ ၄ ကိလုိုမှာ တောင်ကုန်းရှိတဲ့အတွက် ဒါဟာ အဆုံးအဖြတ် ပေးမဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
၄ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
General classification after stage 4# Rider Name (Country) Team Result
1 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 13:11:31
5 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:00:28
6 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:00:35
7 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 0:00:36
မနက်ဖြန်မှာတော့ Rota ကနေ Alcalá de Guadáira အထိ 167.3 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၅ ရက်မြောက်နေ့ Caleb Ewan အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၅ ရက်မြောက်နေ့ ပွဲစဉ်မှာ Caleb Ewan (Aus) Orica GreenEdge က 3:57:28 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ နာမည်ကြီး Sprinter တွေဖြစ်တဲ့ John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin နဲ့ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo တုို့က နဲနဲစီနောက်ကျပြီး ဒုတိယ နဲ့ တတိယ ရပါတယ်။
၅ ရက်ပေါင်း ပထမ အနီရောင်အကျီကိုတော့ (မနေ့ကအထိ ဒုတိယ ရထား သူ) Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin က ရရှိသွားပါတယ်။
Rota ကနေ Alcalá de Guadáira အထိ 167.3 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲအတွင်း တာထွက်ပြီး ကီလုို ၂၀ အတွင်းမှာတင် ၃ ဦးပါ Breakaway တခုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ သူတုို့ ၃ ဦးဟာ ပထမ ပုိုင်းမှာ Peloton ကုို ၃ မီနစ်ကျော်ဖြတ်ထားရာကနေ တဖြေးဖြေးနဲ့ ၇ မီနစ်ကျော်အထိ Gap က ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစိမ်းရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Tinkoff-Saxo အသင်းနဲ့ Giant Alpecin အသင်းတုို့ တလှည့်စီအရှိန်တင်ပြီး Peloton ကုို ဦးဆောင်စီးနုိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၇၀ အလုိုမှာ Gap ကုို ၅ မီနစ်အောက်အထိ ကျအောင် စွမ်းဆောင်နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ Cofidis အသင်းက Nacer Bouhanni ရနုိုင်ဖုို့ ဦးဆောင်စီးနင်းခဲ့ပြန်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ Tinkoff-Saxo နဲ့ Giant Alpecin အသင်းတုို့က အရှိန်ကုိုချလုိုက်တဲ့အတွက် ရှေးပြေးအဖွဲ့ကိုမမိပဲ ၂ မီနစ်ခန့်ဆက်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်။
ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၈ ကီလုိုအလိုမှာတော့မှာတော့ အသင်းကြီးတွေကြား ညီညွတ်မှုပျက်ပြားသွားတဲ့ အတွက် ရှေ့ပြေးအဖွဲ့က အရှိန်တင်ပြီး ထပ်ပြေးနုိုင်တဲ့အတွက် ၁ မီနစ် ၄၀ အထိ ပြတ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅ ကီလုိုမှာ တမီနစ်ခွဲအထိကျန်နေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ ၅ ကိလုိုအလုိုမှာတော့ စက္ကန့် ၄၀ ပဲကျန်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ Astana, Tinkoff, Team Sky နဲ့ Katusha အသင်းတုို့ ရှေ့တက် နေရာယူကြ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးဆောင်လုိုက်နေသူ Bouhanni အရှိန်ကျပြီးနောက် အရှိန်ကိုထိမ်းထား လုိုက်တဲ့အသင်းက MTN-Qhubeka ဖြစ်လာပါတယ်။
နောက်ဆုံးကီလုိုမီတာအရောက်မှာတော့ Orica-GreenEdge အသင်းက Peloton ကို ထိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာအကွေ့အကောက်တွေများတဲ့အတွက် နည်းစနစ်ပုိုင်းအရ နေရာယူတတ်ဖုို့လုိုပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆုိုရင် ဒီလုိုအခြေအနေဟာ တာတုိုဘုရင် ပီတာ ဆာဂင်အကြိုက်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ပန်းဝင်ဖုို့ မီတာ ၂၀၀ လောက်အလုိုကျမှ ပထမ နေရာကစီးနေသူနဲ့ သူနဲ့ကြားကုို Giant Alpecin အသင်းသားတွေ ရုတ်တရက်ဝင်လာတဲ့အတွက် ပြေးလမ်းပိတ်မိသွားပါ တယ်။
၅ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
10 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:48 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
အကျီပုိုင်ရှင်တွေကိုပြောရမယ်ဆုိုရင် ၅ ရက်ပေါင်း ပထမ အနီရောင်ပုိုင်ရှင်အဖြစ် Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin။ အစိမ်းရောင်ပုိုင်ရှင် Point အများဆုံးသူ အဖြစ် Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo။ တောင်တက်ဘုရင် ဖြူ-နီ-ကျား ပုိုင်ရှင်အဖြစ် Omar Fraile Matarranz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA တုို့က ရရှိထားပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Cordoba ကနေ Cazorla အထိ 200.3 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၆ ရက်မြောက်နေ့ Esteban Chaves ထပ်မံ အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၆ ရက်မြောက်နေ့ ပွဲစဉ်မှာ Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge က 4:46:16 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Daniel Martin (Irl) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team နဲ့ Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin တုို့က 0:00:05 စက္ကန့်စီနောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရပါတယ်။
ကုိုလံဘီယာနုိုင်ငံသား Esteban Chaves ဟာ ဒီနေ့ ပထမရတဲ့အပြင် Time bonus ပါထပ်ရတဲ့ အတွက် မနေ့က တစက္ကန့်အသာနဲ့ သူဆီက အနီရောင်အကျီလုသွားသူ (ဒီနေ တတိယ ရသူ) Tom Dumoulin (Ned) ဆီကနေ အနီရောင်အကျီကုို ပြန်ရ လုိုက်ပါတယ်။
Cordoba ကနေ Cazorla အထိ 200.3 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲတလျောက် ရာသီဥတုက အလွန်ပူပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ တာထွက်ပြီး ကီလုို ၆၀ အထိ ဘယ်သူမှ ထွက် မပြေးခြင်းပါ။ ဒါပေမဲ့ ၇၀ ၀န်းကျင်မှာတော့ ၅ ဦးပါ Breakaway တခု စတင်ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။
နောက်ထပ်တဦးပါ ထပ်လုိုက်လာတဲ့အတွက် ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ဟာ ၆ ဦးအထိဖြစ်သွားပြီး Peloton ကုို ၄ မီနစ်အထိ ဖြတ်ထားနုိုင်လုိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တတိယ တောင်အတက်မှာတော့ Movistar နဲ့ Giant-Alpecin အသင်းတုို့က အရှိန်တင်လုိုက်တဲ့အတွက် ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၂၀ ၀န်းကျင်မှာတော့ Gap က တမီနစ်ဝန်းကျင်ပဲ ကျန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Peloton က တင်လုိုက်၊ Breakaway က ဆက်ပြေးလုိုက်နဲ့ ပန်းဝင်ဖုို့ ၃ ကီလုို အလုို မှာမှ အားလုံးကိုမိသွားတဲ့သဘောပါ။ အဲဒီလုိုမိပြီးမကြာခင် ပန်းဝင်ဖုို့ ၂ ကီလုိုအလုို နောက် ဆုံးကုန်းအတက်မှာ အခု ပထမ ရသွားတဲ့ Esteban Chaves က တဦးတည်း ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
၆ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
10 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:01:08 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Jodar ကနေ La Alpujarra အထိ 191.1 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၇ ရက်မြောက်နေ့ Bertjan Lindeman အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၇ ရက်မြောက်နေ့ ပွဲစဉ်မှာ Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo က 5:10:24 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida က 0:00:09 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ GC နာမည်ကြီးတဦးဖြစ်သူ Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က 0:00:29 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး တတိယ ရ ပါတယ်။
အီတလီရဲ့အကျော်အမော်စက်ဘီးသမား Astana အသင်းခေါင်းဆောင် Aru အခုလုို တတိယ ရသွားပေမဲ့ အနီရောင်အကျီကုိုတော့ Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge က ဆက်ထိမ်းထားဆဲပါ။
ဒါပေမဲ့ Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team အခုလုို ခုန်ပျံကျော်လွှားတက် လာတဲ့အတွက် Tour de France ချန်ပီယံ Christopher Froome (GBr) Team Sky နဲ့ နာမည်ကြီး GC သမားတဦးဖြစ်သူ Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team တုို့ အချိန်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ၁-၁၀ စာရင်းကနေ ပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
Jodar ကနေ La Alpujarra အထိ 191.1 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲဟာ ပူပြင်းတဲ့ ရာသီအောက် က ပထမ ဆုံး တောင်တက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ တာထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာကတည်းက ၅ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု ထွက်ပြေးသွားတာ ကီလုို ၃၀ အတွင်းမှာတင် ၈ မီနစ်နီးပါး Peloton ကုို ဖြတ်ထားနုိုင်လုိုက်ပါတယ်။
နောက်ပုိုင်းမှာ Katusha, Astana နဲ့ Movistar အသင်းတွေက တလှည့်စီအရှိန်တင်လုိုက်ပေ မဲ့ Gap က ကျမလာပဲ Andalucían တောင်အတက်မှာ ၁၃ မီနစ်ကျော်အထိ ပြတ်သွားခဲ့ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတောင်အတက် ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၈ ကီလုိုအလုိုမှာတော့ Gap ကို ၅ မီနစ် အထိကျအောင် Peloton က စွမ်းဆောင်နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Astana အသင်း ရှေ့တက်လာပြီးလုိုက်ပေမဲ့ Breakaway ၅ ဦးကို တော်ရုံနဲ့ မမိနုိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ပန်းဝင်ဖုို့ ၂ ကီလုိုအလိုအထိ ၃ ဦးက ရှေ့မှာ လွတ်နေဆဲပါ။ နောက်ဆုံးမှာ Aru ရဲ့ တရှိန်ထုိုး တုိုက်ခုိုက်မှုကြောင့် ရှေ့ပြေး ၂ ဦး ပ-ဒု ရပြီး သူက တတိယ ရသွားခဲ့ပါတယ်။
၇ ရက်တာအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့....
1 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 27:06:13
16 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:02:05 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Puebla de Don Fabrique ကနေ Murcia အထိ 182.5 km ကီလုို မီတာကုို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၈ ရက်မြောက်နေ့ Jasper Stuyven အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၈ ရက်မြောက်နေ့ ပွဲစဉ်မှာ Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing က 4:06:05 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Pello Bilbao (Spa) Caja Rural-Seguros RGA နဲ့ Kévin Reza (Fra) FDJ.fr တုို့က နဲနဲစီနောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရသွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ပွဲမှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုအမျာဆုံးကတော့ ပထမ ရတဲ့လူတွေထက် မဟာလဲပြိုမှု အတွင်း ဒဏ်ရာပြင်းလုို့ပြိုင်ပွဲကထွက်သွားရသူတွေ၊ အရှိန်တင် ပြေးဖုို့ကြိုးစားနေစဉ် အာဟာရဝေပေးတဲ့ ဆုိုင်ကယ်နဲ့မတော်တဆတုိုက်မိပြီး လဲပြိုသွားလုို့ မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရသူတွေ အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
Puebla de Don Fabrique ကနေ Murcia အထိ 182.5 km ကီလုို မီတာ ပြိုင်ပွဲအတွင်း လဲပြိုမှု ၃ ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ပထမ အကြီးမားဆုံးလဲပြိုမှုဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ ၄၈ ကီလုို မီတာအလုို နောက်ဆုံးကျန်တဲ့တောင် ၂ လုံးက ပထမ အလုံးကုိုတက်ခါနီးအချိန်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ လဲပြိုမှုအတွင်း ဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက် နာမည်ကြီး GC သမား Dan Martin, Tejay van Garderen နဲ့ တာတုိုသမား Nacer Bouhanni နဲ့ Kris Boeckman တုို့ကုို အရေးပေါ် ဆေးရုံတင်လုိုက်ပါတယ်။
Tejay van Garderen ဟာ Tour de France ပွဲတုန်းကလည်း နောက်ဆုံးသတင်းပတ် ရောက်မှ နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပွဲကနေထွက်လုိုက်တာကြောင့် ဒီပွဲကို အားခဲထား သူဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ခဲလေသမျှ သဲရေကျ လုို့ပြောရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။
နာမည်ကြီး GC သမားတွေလုို ဒီနေ့ကံဆုိုးသူ Sprinter တာတုိုဘုရင်တဦးကတော့ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုလဲမှုတွေအတွင်း တခါမှ မပါဖူးတဲ့ ဆာဂန်ဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၀ ကီလုိုဝန်းကျင်အလို အရှိန်တင်ပြီးပြေးဖုို့ကြိုးစားနေစဉ်၊ အားလုံးကလဲ ဒီနေ့ သူ ပထမ ရနုိုင်တယ်လို့ ထင်ထားစဉ်မှာ မမျှော်လင့်ပဲ အာဟာရဖြည့်ပေးတဲ့ကားနဲ့တုိုက်မိပြီး ခပ် ပြင်းပြင်း ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ ပွဲကနေထွက်လောက်တဲ့အထိ ဒဏ်ရာမပြင်းပေမဲ့ ဒီလုိုလဲပြို တာ ဒါ ပထမ ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလဲပြိုမှုတွေ၊ ကံဆုိုးမှုတွေမတုိုင်ခင် ပထမ ပုိုင်းအခြေအနေကိုပြောရမယ်ဆုိုရင် ၆ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခုက ၄ မီနစ်ကျော်အထိ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
၈ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
1 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 31:12:18
3 Nicolas Roche (Irl) Team Sky 0:00:36
4 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:00:49
5 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:00:56
6 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:57
8 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 0:01:18
9 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:19
10 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:01:21
11 Christopher Froome (GBr) Team Sky 0:01:22
12 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 0:01:29 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Torrevieja ကနေ Cumbre del Sol အထိ 168.3 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
Peter Sagan (Svk) ဆုိုင်ကယ်အတုိုက်ခံရမှု...။ (၂၉-၈-၂၀၁၅)
အခုနောက်ဆုံး ၀င်လာတဲ့သတင်းတွေအရ Peter Sagan (Svk) ကုို လဲပြိုအောင် ဆုိုင်ကယ် နဲ့တုိုက်သူ သုို့မဟုတ် တုိုက်သူတွေကုို ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူနုိုင်အောင်ကြိုးစားသွား မယ်လို့ Tinkoff-Saxo အသင်းကကြေငြာချက်ထုတ်လုိုက်ပါတယ်။
ပန်းဝင်ဖုို့ ၈ ဒသမ ၂ ကီလုိုမီတာအလိုမှာ ပီတာဆာဂင်အား ဆုိုင်ကယ်နဲ့ တုိုက်မှုဟာ လူရဲ့ မှား ယွင်းမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နုိုင်ပေမဲ့ ဒါဟာ လက်မခံနုိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန် ချက်ကဆုိုပါတယ်။
ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတုိုင်းပါပဲ။ ပီတာဆာဂင်ဟာ ဒီနေ့ပွဲအတွက် ပထမ ရဖုို့အလားအလာ အများဆုံးရှိနေသူပါ။ ရှေ့ပုိုင်းလဲပြိုမှုကြောင့် သူရဲ့ပြိုင်ဖက် Sprinter အတော်များများ ပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီး သူနဲ့ အနဲငယ်သာ ပထမ အုပ်စု လူ ၅၀ လောက်အတွင်း ပါလာတာဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီလုိုအတုိုက်ခံရတဲ့အတွက် သူရဲ့ယာဖက်ခြေထောက်မှာ သွေးစွန်းပြီး ခပ်ပြင်းပြင်းဒဏ်ရာ ရထားတာကုိုတွေရပါတယ်။ နောက်ပုိုင်းတက်လာတဲ့ပုံတွေအရ ရှေ့ပြေး ၃ ဦးကိုမီနုိုင်ဖုို့ လူ ၅၀ ၀န်းကျင်အုပ်ကို သူကဦးစီးပြီးလုိုက်နေစဉ် (လက်ကုို လက်ကုိုင်ပေါ်ထောင့်ထားချိန်) နောက် ကတက်လာတဲ့ ဆုိုင်ကယ်ထဲက တစီးစီးက သူ့ကုို တုိုက်ထည့်လုိုက်ပုံရပါတယ်။
သူဟာ လမ်းမပေါ် ဒလိမ့်ခေါက်ကွေးကျသွားပြီး လုံးဝ ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆုိုင် ကယ်သမားက တောင်းပန်းတာမရှိပါဘူး။ အလွန်ဒေါကနေတဲ့ ဆာဂန်ဟာ တွေ့သမျှအားလုံး ကုို ကန်ကျောက်ထုနှက်နေတဲ့အပြင် ဆေးဖက်ဆုိုင်ရာကားရဲ့ အကူအညီကုိုတောင် မယူပဲ မောင်းလွတ်နေပါတယ်။
ဆုိုင်ကယ်သမားအပေါ် တာဝန်ရှိသူတွေက ဘာမှအရေးမယူတဲ့အပေါ် သူ အတော်ဒေါကန် နေပုံရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ စက်ဘီးပေါ်ပြန်တက်ပြီး ၀မ်းနည်းပက်လက်နဲ့ ဆက်စီးခဲ့ ပါတယ်။
သူဟာ ၅ မီနစ်လောက်နောက်ကျပြီး တဦးတည်းပန်းဝင်လာပေမဲ့ မီဒီယာ တွေဆီမလာပဲ အသင်းကားပေါ် တခါတည်း တန်းတက်သွားပါတယ်။ TV သမားတွေအပါဝင် သူ့ကုိုစိတ် ၀င်စားတဲ့ မီဒီယာသမားတွေဒါဇင်နဲ့ချီ အုပ်စုလုိုက်ရောက်လာကြပေမဲ့ သူက အတွေ့မခံ ခဲ့ပါဘူး။
အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက မီဒီယာတွေကို အခြေနေတွေရှင်းပြပြီးတဲ့နောက် အခုလုို တရား စွဲမယ်ဆုိုတဲ့ ကြေငြာချက် ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာပြင်းရင်တော့ ပီတာဆာဂင် မနက်ဖြန် ဆက်စီးနုိုင်ပါ့မလားလုို့ သူ့ပရိတ်သတ်တွေကစိုးရိမ်နေပါတယ်။
Tour de France မှာ ၄ နှစ်ဆက် တုိုက် အစိမ်းရောင်အကျီရထားတဲ့ စလုိုဗက်ကီးယား လူငယ် အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဆာဂန်ဟာ ဒီပွဲ ပြီးရင်ကျင်းပမဲ့ ကမ္ဘာ့စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲကုိုဝင်ဖုို့ ပြင်ထားသူလဲဖြစ်ပါတယ်။ ။
Peter Sagan (Svk) ဒဏ်ရာကြောင့် ပြိုင်ပွဲက ထွက်လုိုက်ရ (၃၀-၈-၂၀၁၅)
မနေ့က ဆုိုင်ကယ်နဲ့အတုိုက်ခံရမှုအတွင်း လဲပြိုပြီး ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo ဟာ ဒီနေ့ ဆက်မစီးတော့ပဲ ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်သွားပြီလုို့ သူ့ရဲ့အသင်း Tinkoff-Saxo က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မနေ့ကပြိုင်ပွဲအတွင်း ပန်းဝင်ဖုို့ ၈ ဒသမ ၂ ကီလုိုအလုိုမှာ လူ ၅၀ ၀န်းကျင်ပါတဲ့ အမီလုိုက် အုပ်စုကိုဦးဆောင်စီးနင်းနေစဉ် နောက်ကလုိုက်လာတဲ့ မော်တယ်ဆုိုင်ကယ်အုပ်စုထဲက Shimano neutral service motorbike တစီးက သူကို ၀င်တုိုက်ခဲ့တာပါ။
အတုိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာ လမ်းဖြောင့်တဲ့အတွက် သူဟာ လက်ကုိုင်ပေါ် တဒေါင့်ထောင့်ပြီး စီး နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ဒီလုိုနဲ့ ဘယ်လုိုမှအရှိန် မထိမ်းနုိုင်ပဲ ဒလိမ့်ခေါက်ကွေးပြုကျတဲ့ပုံ တွေ၊ ဘယ်ဖက်ချမ်းတခုလုံး ပွန်းပဲ့သွားတဲ့ပုံတွေ၊ အားလုံးကို ဒေါကန်ပြီး စက်ဘီးကိုကန် ကျောက်၊ ဆေးဘက်ဆုိုင်ရာကားကုို ရန်မူ စသဖြင့် ဆုိုင်ကယ်သမားအပေါ် မကျေနပ်မှုကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ အသင်းရဲ့ကြေငြာချက်အရ သူဟာ ဘယ်ဖက်ခြေထောက်နဲ့ ပေါင်မှာ ဒဏ် ရာရခဲ့ပြီး အရေပြားတွေ စုတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြိးတော့ ဘယ်ဖက်လက်ဖျံရဲ့ ကြွက်သား တွေ အတွင်းကျေ နဲနဲဖြစ်သွားပြီး သွေးချေအုတွေဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်စီးဖုို့ စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားမရှိတာကြောင့် ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်လုိုက်တာဖြစ်တယ်လုို့ အသင်းရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
''ကံမကောင်းအကြောင်းမလှချင်တော့ ဒါဟာ ပထမ ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အပျက်မဟုတ်ပါဘူး'' လုို့ ဆာဂန်ကပြောပါတယ်။ စက်ဘီးသမားတွေကြားထဲ ဖြတ်တော့မယ်ဆုိုရင် မော်တော်ဆုိုင် ကယ်သမားတွေအနေနဲ့ အထူးသတိထားဖုို့လုိုကြောင်း၊ ကျနော့်အထင်တော့ ဒီလူတွေဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်စက်ဘီးသမားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကိုသိပ်အလေးထားပုံမရကြောင်း၊ ကံကောင်းတာက ကျနော်ရဲ့ ဒဏ်ရာဟာ သိပ်စုိုးရိမ်ဘွယ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်လုို့ မော်တော်ဆုိုင်ကယ် က ကျနော်ကိုယ်ပေါ်ကြိတ်နင်းသွားရင် ဘယ်လုိုလုပ်မလဲ... ဆုိုပြီး ဆာဂန်ကပြောတယ်လုို့ အသင်းရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဆက်ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
''တကယ်လုို့ ကျနော်တဦးတည်းဖြစ်စေ၊ တခြားပြိုင်ဖက်တဦးဦးနဲ့ ချိတ်မိလုို့ဖြစ်စေ ပြိုလဲတယ် ဆုိုရင် ဒါဟာ အားကစားနည်းရဲ့ သဘောသဘာဝအရဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စလုို့ ကျနော်လက်ခံနုိုင် ပါတယ်။ အခုဟာက မော်တော်ဆုိုင်ကယ်က အသားလွတ်ကြီး လာတုိုက်တာဆုိုတော့ ဒါကို ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေက လက်မခံသင့်ပါဘူး'' ။ စက်ဘီးသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကို ထိပ်တန်းဦးစား ပေးအဖြစ် အားလုံးက၀ုိုင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်လုို့ ဆာဂန်က အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။
မော်တော်ဆုိုင်ကယ်လာတဲ့အသံကို ကျနော်မကြားမိဘူး။ Heigh Speed နဲ့သွားနေတဲ့ စက်ဘီးအုပ်ထဲ မော်တော်ဆုိုင်ကယ်တွေ ဒိလုိုဝင်ဖြတ်ပြီးလာတယ်ဆုိုတာကို ကျနော် လက်မခံနုိုင်ပါဘူးလုို့ ဆာဂန်ကပြောပါတယ်။
နောက်ဆုံး ကျနော်အသင်းရဲ့ဟုိုတယ်ခန်းထဲရောက်တော့ ကျနော်ရဲ့ ပြုမှုမှုတွေဟာ စက်ဘီး ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပုံရိပ်ကို ထိခုိုက်စေတဲ့အတွက် ဒဏ်ငွေ ၃၀၀ ပေးရမယ်ဆုိုတဲ့ စာကုိုဖတ်ရပါတယ်။ ဒါကို ကျနော်ပေးမှာပါ။
''ဒါပေမဲ့ သေချာတာကတော့ ဒါဟာ တရားမျှတမှုမရှိပါဘူး''လုို့ ဆာဂန် ကပြောခဲ့တယ်လုို့ အသင်းရဲ့ ကြေညာချက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဆာဂန်ထွက်သွားပေ မဲ့ Rafa Majka က Tinkoff-Saxo’s အသင်းကို ဆက်လက်ဦးဆောင် စီးနင်းသွားမယ်လုို့သိရပါတယ်။
Sagan ကတော့ Monaco မှာရှိတဲ့ နေအိမ်ဆီပြန်ပြီး ဒဏ်ရာအတွက် အနားယူမယ်လို့ ယူဆ ရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ စက်တင်ဘာလကုန်မှာ ကျင်းပဖုို့ရှိနေတဲ့ World road race championships ပွဲအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆီ ခရီးဆက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
VueltaaEspaña ၉ ရက်မြောက်နေ့ Tom Dumoulin အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၉ ရက်မြောက်နေ့ ပွဲစဉ်မှာ Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin က 4:09:55 နာရီ နဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ နာမည်ကြီး GC သမား၊ ပူပူနွေးနွေး Tour de France ချန်ပီယံ Christopher Froome (GBr) Team Sky က 0:00:02 စက္ကန့် နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha က 0:00:05 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။
Tom Dumoulin (Ned) ဟာ ဒီနေ့ပွဲမှာ ပထမ ရတဲ့အပြင် မနေ့ကတည်းက အနီရောင်အကျီ ပုိုင်ရှင် Esteban Chaves (Col) ကုို ၁၀ စက္ကန့်သာပြတ်နေ တာကြောင့် ဒီနေ့ပထမ ရပြီး အနီရောင်အကျီကုိုပါ ရသွားပါတယ်။
Torrevieja ကနေ Cumbre del Sol အထိ 168.3 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲအကြောင်း မပြော ခင် ဒီနေ့ဆက်မစီးနုိုင်လုို့ပြိုင်ပွဲကထွက်သွားရသူ ၃ ဦးကတော့ မနေ့က ပထမ ရသူ Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing၊ မနေ့က ဆုိုင်ကယ်နဲ့အတုိုက်ခံရသူ Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo နဲ့ Thomas Degand (Bel) IAM Cycling တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲစဉ်အတွင်း တာထွက် ပြီး ၃ ကီလုိုလောက်မှာကတည်းက ၁၄ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားပြီး ၄ မီနစ်ကျော်အထိ Peloton ကုိုဖြတ်ထား နုိုင်လုိုက်ပါတယ်။
ဒီအုပ်စုကိုပြန်ဖမ်းနိင်ဖုို့ Peloton က အရှိန်တင်လုိုက်နေစဉ်မှာ စက်ဘီးသမားနှစ်ဦး ဘီးချင်း ချိတ်မိရာကနေ ကြီးမားတဲ့လဲပြိုမှုတခုဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ်။ အနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Chaves။ Astana မှ Aru နဲ့ Mikel Landa နဲ့ Movistar မှ Valverde အပါဝင် နာမည်ကြီးအတော် များများ ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပုိုင်း Breakaway အဖွဲ့အရှိန်ကျလာပြီး ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၅ ကီလုိုဝန်းကျင်မှာ ၉ ဦးကုို Peloton က ပြန်မိသွားပါတယ်။ ကျန် ၅ ဦးက ဆက်ပြေးနေဆဲဖြစ်ပြီး ပန်းဝင်ဖုို့ ၃ ကီလုို ၀န်းကျင်အလုိုမှာ အစိမ်းရောင်အကျီပုိုင်ရှင် (ရှေ့ကလဲပြိုမှုအတွင်းပါခဲ့သူ) Movistar မှ Valverde က အရင်ဆုံး အရှိန်တင်ပြီး စပြေးပါတယ်။
၂ ကီလုိုဝန်းကျင်အလိုမှာတော့ နာမည်ကြီးအားလုံး အကြိတ်အနယ် သူ့တလှည့်ကုိုယ်တ လှည့်ရှေ့တက်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး မီတာ ၁၀၀၀ လောက်အတွင်းမှာတော့ Odriguez၊ Froome နဲ့ Dumoulin ၃ ဦး ရှေ့ဆုံးရောက်လာပါတယ်။ အခြေအနေကို ကြည့်ရတာ Froome ပဲ ပထမ ရသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တတိယ နေရာကနေ ယက်ကန်ကန်လုိုက်လာသူ Dumoulin က ဘယ်လုိုစွမ်းအင် တွေပေါ်လာမှန်းမသိ။ ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၀ မီတာလောက်အလိုမှာမှ Froome ကုိုကျော်ဖြတ်ပြီး ၀င်သွားခဲ့ပါတယ်။
၉ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
General classification after stage 9# Rider Name (Country) Team Result
10 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:52 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Valencia ကနေ Castellón အထိ 146.6 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ သဖက်ခါ အင်္ဂါနေ့ကတော့ ပထမ သတင်းပတ်အတွက် နားရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၁၀ ရက်မြောက်နေ့ Kristian Sbaragli အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၀ ရက်မြောက်နေ့ ပွဲစဉ်မှာ Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka က 3:12:43 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ နာမည်ကြီး Sprinter John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin နဲ့ Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team တုို့က နည်းနည်းစီနောက်ကျပြီ ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရပါတယ်။
အနီရောင်အကျီကုိုတော့ မနေ့ကရထားသူ Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin က ဒီမှာလဲ ဆက်ထိမ်းထားဆဲပါ။
Valencia ကနေ Castellón အထိ 146.6 km ကီလုိုမီတာပွဲစဉ်ဟာ စပိန်ရဲ့ အရှေ့ဖက် ပင် လယ်ကမ်းတလျောက်စီးရတာဖြစ်ပါတယ်။ တာထွက်မှာကတည်းက အရှိန်တင်ခဲ့တဲ့ စက်ဘီး သမားတွေဟာ Breakaway အဖြစ် ထွက်ပြေးဖုို့ကြိုးစားကြပေမဲ့ ၂၅ ကီလုိုအထိ ဘယ်သူမှ လွတ်အောင် မပြေးနုိုင်ခဲ့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးမှာတော့ Breakaway မဖြစ်ပဲနဲ့ Peloton ထဲက လက်ရွေးစက် လူ ၄၀ ခန့် ရှေ့ ထွက်လာပြီး ကျန်သူတွေ ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလောက်လူများပေမဲ့ ကျန်နေသူတွေကို ၃ မီနစ်ထက်ပုိုပြတ်အောင် မပြေးနုိုင်ခဲ့ပါ။ အချင်းချင်း ဟန်ချက်ညီ မစီးနုိုင်ခဲ့ပါ။
ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၅၀ ၀န်းကျင်မှာတော့ အားလုံးတအုပ်တည်း ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပုိုင်း အုပ်စုထဲကထွက်ပြေးနုိုင်ဖုို့ ဆက်တုိုက်ဆုိုသလုို တုိုက်ခုိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ Niki Terpstra (Etixx-QuickStep) တဦးတည်းသာ လွတ်ထွက်သွားပြီး စက္ကန့် ၃၀ အထိ ပြတ်အောင် ပြေး ထွက်နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ကီလို ၅၀ ၀န်းကျင်မှာပဲ လဲပြိုမှုတခုဖြစ်ပွါးပြီး Sky အသင်းက စက်ဘီးသမားတွေအပါဝင် အတော်များများ ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီလုိုလဲပြိုချိန်မှာ စက်ဘီးသမား ၃ ဦး ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားပြန်ပါတယ်။
ပန်းဝင်ဖုို့ ၇ ကီလုိုဝန်းကျင်အလုိုမှာတော့ အခြေအနေဟာ Sprint တင်ပြီး ပန်းဝင်ကြရမဲ့ ပုံ ပေါ်လာပါတယ်။ ပီတာဆာဂင်အပါဝင် နာမည်ကြီး တာတုိုဘုရင်တချို့ ပွဲကနေထွက်သွားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေက ဂျာမဏီတာတုိုဘုရင် John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin ပေါ် ရောက်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူကုိုကျော်ပြီး Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka က ပထမ ရသွားခဲ့ပါ တယ်။
၁၀ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
General classification after stage 10# Rider Name (Country) Team Result
1 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin 38:34:56
5 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:01:13
6 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:01:17
မနက်ဖြန်မှာတော့ ပထမ သတင်းပတ်အတွက် နားရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့မှာတော့ Andorra la Vella ကနေ Cortals d'Encamp အထိ 138 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဧရာမတောင်တက်ပွဲ ဘယ်သူနုိုင်မလဲ...။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ပွဲစဉ်ကုို ပြီးခဲ့တဲ့ မီနစ်ပုိုင်းကပဲ စတင်လုိုက်ပါပြီ။
၁၀ ရက်တာပွဲအပြီး တရက်တာနားပြီးတဲ့နောက် ဒီနေ့စတင်တဲ့ပွဲဟာ ဧရာမ တောင်တက် ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ Tour de France ချန်ပီယံ Froome က ဒီနေ့ တက်ရမဲ့ Andorra တောင် (ပေ ၆၀၀၀ ကျော်မြင့်) ဟာ နုိုင်ခြေရှိသူတွေကို စီစစ်မဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ ပြော ပါတယ်။
ဒီနေ့ပွဲမှာ လက်ရှိ Tour de France ချန်ပီယံ ဗြိတိန်က Sky အသင်းခေါင်းဆောင် Froome ပဲ ပထမ ရမလား။ ကုိုလံဘီယံလူငယ် Movistar အသင်းခေါင်းဆောင် Nairo Quintana ပဲ ရမလား။ စာရေးသူကတော့ ကင်တားနားကို ပုိုအမှတ်ပေးထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Tom Dumoulin (Giant-Alpecin), အီတလီ လူငယ်ခြေတက် Fabio Aru (Astana), Esteban Chaves (Orica-GreenEdge) Joaquim Rodriguez (Katusha) နဲ့ Movistar မှ ကင်တားနားရဲ့အသင်းဖေါ် Alejandro Valverde တုို့ကိုလဲ မေ့ထားလုို့မဖြစ်ပါဘူး။
TV (eurosport) ရှေ့မှာ ထုိုင်ပြီး အသေအချာ စောင့်ကြည့်ရမဲ့ ပွဲကောင်းတခု ဖြစ်ပါကြောင်း...(၀န်ခံချက်။ ဒီနေ့မှ တီဗွီ ဆင်လုို့ပြီးပါတယ်)။
ဒီနေ့ပွဲမှာ ပထမရ သွားသူကတော့ Astana Pro Team အသင်းမှ Mikel Landa Meana (Spa) ဖြစ်ပါတယ်။ 4:34:54 နာရီနဲ့ ရသွားတာပါ။ သူဟာ တာထွက်ကတည်းက ပထမ ရှေး ပြေးအုပ်စုမှာပါလာသူဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအဖြစ်လဲ Astana Pro Team အသင်းက နာမည်ကြီး အီတလီလူငယ် Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က 0:01:22 နောက်ကျပြီး ရသွားပါတယ်။ သူဟာ အနီရောင်အကျီ ကုိုပါ ရသွားတယ်လုို့ ယူဆရပါတယ်။ (အသေးစိပ် ထပ်မံတင်ပြပေးပါ့မယ်)
တခြား ၁-၁၀ ပန်းဝင်သူတွေကတော့ ..3 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:01:40
10 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 0:03:02 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူမှန်းခဲ့တဲ့ ကုိုလံဘီယာလူငယ် ကင်တားနားက ပန်းဝင်ဖုို့ ၅ ကီလုိုလောက်အလုိုမှာ ဒုတိယ (အနီရောင်) ရသွားသူ ဖရူနောက်ကုို မလုိုက်နုိုင်ပဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ တခြားနာမည်ကြီး ခရစ်ဖရူးကတော့ ဒီနေ့ ကံမကောင်းပါဘူး။
တာထွက်ကတည်းက စက်ဘီးဘရေကျပ်လုို့ ပြင်နေရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကီလုို ၅၀ ၀န်းကျင်အကွေ့မှာ လမ်းကာထားတဲ့ သံဘန်းနဲ့တုိုက်မိပြီး ဒဏ်ရာရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲရဲ့ အလယ်တောင် (တောင် ၅ လုံးမှ) ကီလုို ၅၀ ၀န်းကျင်မှာ သူ ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
၈ မီနစ်တောင် နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ဒီပွဲမှာ သူ ပထမ ပြန်ရဖုို့ သိပ်မလွယ်တော့ပါ။ ဖရူက အလားလာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပြီး ကင်တာနားနဲ့ ကျန်သူတွေလဲ နောက်ထပ် ၁၀ ရက်အတွင်း မျှော်လင့်ချက်တော့ ရှိနေပါသေးတယ်။
Giro d'Italia မှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Astana အသင်းသား ၂ ဦး VueltaaEspaña မှာ ဗုိုလ်စွဲတော့မလား...။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဧရာမတောင်တက်ပွဲမှာ Astana Pro Team အသင်းမှ Mikel Landa Meana (Spa) က 4:34:54 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ တသင်းတည်းမှ GC နာမည်ကြီး အီတလီလူငယ်ခြေတက် Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က 0:01:22 နောက်ကျပြီး ဒုတိယ ရပါတယ်။ Ian Boswell (USA) Team Sky 0:01:40 မီနစ်နောက်ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။
ဒုတိယ ရတဲ့ Fabio Aru (Ita) ဟာ GC သမားပြိုင်ဖက်အားလုံးကို အံ့သြဘွယ် ဖြတ်ကျော်နုိုင်ခဲ့တာကြောင့် ၁၁ ရက်ပေါင်း ပထမ အနီရောင်အကျီကုိုပါ ရသွား ပါတယ်။
Andorra la Vella ကနေ Cortals d'Encamp အထိ 138 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲအတွင်း အမြင့်ပေ ၆၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ တောင် ၅ လုံးပါဝင်ပါတယ်။ ၁၀ ရက်တာပွဲအပြီး တရက်တာ အနားယူပြီးတဲ့နောက် ဒီဧရာမတောင်တက်ပွဲကုို စက်ဘီးသမားတွေနွှဲခဲ့ရတာပါ။
ပြိုင်ပွဲအစမှာ တင်ပြခဲ့တဲ့အတုိုင်း ဒီနေ့တောင်တက်ပွဲဟာ ၂၁ ရက်တာပွဲစဉ်အတွင်း ဘယ်သူ အနုိုင်ရမလဲဆုိုတာကို ဆန်းစစ်မဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လုို့ Tour de France ချန်ပီယံ ခရစ်ဖရူးပြောခဲ့ တဲ့အတုိုင်းပါပဲ။ တကယ့်ကို အသေအလဲ စီးခဲ့ရတဲ့ပွဲပါ။
ဒါပေမဲ့ ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သူ၊ ဒီနေ့တောင်တက်ပွဲစဉ်မှာ အနီရောင်အကျီရလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခံထားရသူ Sky အသင်းခေါင်းဆောင် Froome ကုိုယ်တုိုင်ကတော့ ဒီနေ့ ကံမကောင်း ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ တာထွက်ကတည်းက စက်ဘီးဘရိတ်ကျပ်လုို့ပြင်နေရပါတယ်။ ပြီးတော့ အုပ်စုအလုိုက်အကွေ့တခုမှာ ရှေ့က လမ်းဘေးဘားတန်းကိုမရှောင်နုိုင်ပဲဝင်တုိုက်လုိုက်တဲ့ အတွက် ဒူးမှာ ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။
ဒီဒဏ်ရာကို အံကြိတ်ပြီး အုပ်စုထဲလုိုက်နုိုင်အောင်ကြိုးစားလာခဲ့ပေမဲ့ တတိယ တောင် အ တက်၊ ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၅၀ ၀န်းကျင်အလုိုမှာတော့ ဆက်မလုိုက်နုိုင်တော့ပဲ ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါ တော့တယ်။ ပန်းဝင်ချိန်ှမှာ ၈ မီနစ်တောင် နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ၂၁ ရက်ပြီးရင် (နောက် ထပ် ၁၀ ရက်အတွင်း) ပထမ ပြန်ရအောင်လုပ်ဖုို့ဆုိုတာ မလွယ်တော့ပါဘူး။
Breakaway အုပ်စုအကြောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆုိုရင် တာထွက်ပြီး ၁၀ ကီလုိုဝန်းကျင်၊ အထူး သဖြင့် ခရစ်ဖရူး လဲကျချိန်လောက်မှာ လူ ၂၀ လောက်ပါတဲ့ ရှေ့ပြေးအုပ်စု စထွက်ပြေးနုိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ပထမ တောင်တက်အပြီးမှာ ၃ မီနစ်လောက်အထိ Peloton ကုိုဖြတ်ထားနုိုင်လုိုက်ပါ တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ပုိုမဖြတ်နုိုင်အောင် Sky အသင်းက ဦးဆောင်ပြီး Peloton ကုိုထိမ်းထားနုိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒီလုိုထိမ်းထားတဲ့ကြားက ရှေးပြေးအုပ်စုအရှိန်ပိုကောင်းလာပြီး ၄ မီန်ကျော်အထိ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ အဲဒီအချိန်ထိ Sky ကပဲ ဦးဆောင်နေပြီး ကျန်တဲ့ အသင်းတွေ ရှေ့တက်မလာကြပါဘူး။
ရှေ့ပြေးအုပ်စုထဲမှာ လက်ရှိနာမည်ကြီး GC သမားတွေမပါပေမဲ့ Giro d'Italia မှာ တတိယ ရထားသူ Astana Pro Team အသင်းမှ Mikel Landa Meana (Spa) ပါနေတာကို ထင် ထင်ရှားရှားကြီးမြင်နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်က ၅ လုံးတောင်ရှိတာမုို့ ၃ လုံးကျော်တဲ့အထိ မမိသေးရင်တောင် နောက်ဆုံး ပန်းဝင်တောင်အတက်မှာ ဒီအုပ်စုကုို Peloton က မိသွားလိမ့် မယ်လို့ ထင်နေဆဲပါ။
ပွဲကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့နေရာကတော့ ၄ လုံးမြောက်တောင်အတက် သို့မဟုတ် ပန်းဝင်ဖုို့ ၄၅ ကီလုိုဝန်းကျင်အလိုလောက်မှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ခရစ်ဖရူးမလုိုက်နုိုင်တော့လုို့ Sky က အရှိန်လျော့ချလုိုက်တယ်လုို့ ယူဆရပါတယ်။ အရူရဲ့ Astana Pro Team အသင်းမှ ၃ ဦး ရှေ့ တက်ဦးဆောင်စီးတာတွေ့ရပါတယ်။ သူတုို့ ၃ ဦးနောက်မှာတော့ Movistar မှ ကင်တားနားနဲ့ နောက်တဦး။
ဒီအုပ်စုတဖြေးဖြေးနဲ့အရှိန်တင်လုိုက်တာ ခရစ်ဖရူးတုို့အုပ်စု ၃ မီနစ်လောက်အထိ ပြတ်ကျန် ခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့ပြေုးုအုပ်စုကိုမီဖုို့ ၂ မီနစ်ဝန်းကျင်သာလုိုတော့ပေမဲ့ ဒီထက်ပုိုပြီး အရှိန်မတင်နုိုင် ခဲ့ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ရှေ့ပြေုးအုပ်စုရဲ့ခြေက ထင်ထားသလုို ကျမလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီအုပ်စု ထဲမှာတင် အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်အကျီသမားတွေ ၁ မီနစ်လောက် ထပ်ပြတ်ကျန်ခဲ့ပြန်ပါ တယ်။
ဒါပေမဲ့တောင်ကများတော့ အနီရောင်အုပ်စု ထပ်မီလာပြီး ၁၀ ဦးကျော်ပါတဲ့ အမီလုိုက်အုပ်စု အဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားပြန်ပါတယ်။ ဒီလုိုနဲ့ နောက်ဆုံးတောင်အတက် (နောက်ဆုံးတောင် က ၉ ကီလုိုအရှည်ရှိပါတယ်) ၇ ကီလုိုဝန်းကျင်မှာတော့ အခု အနီရောင်ရသွားတဲ့ အရူ တကိုယ်တော် စ ထွက်ပြေးပါတယ်။
GC အတွက် ဒုတိယ ရသွားသူ Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha နဲ့ သူ့အသင်း ဖေါ်တဦးမှအပ ကင်တားနားအပါဝင် တအုပ်လုံး ချက်ချင်းမလုိုက်နုိုင်ပဲ ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အရူဟာ ကပ်ပါလာတဲ့ ၂ ဦးကိုပါ ထပ်ဖြတ်ပြီး တကို်ယ်တော် အသေအလဲ ဆက်စီးသွားပါ တယ်။
ဒါက GC သမားတွေရဲ့ပြိုင်ပွဲပါ။ သူတုို့တွေ အခုလုိုအကြိတ်အနယ်ပြိုင်နေစဉ်မှာ ပထမ အုပ်စု Breakaway ထဲကနေ ရှေ့ဆုံးအုပ်စုမှာပါပြီး တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်လာသူ Mikel Landa Meana (Spa) က အဲဒီအချိန်၊ ပန်းဝင်ဖုို့ ၃ ကီလုိုလောက်အလုိုအထိ ၂ မီနစ်အသာနဲ့ ရှေ့မှာ ပြေးနေဆဲပါ။
၁၁ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
15 Christopher Froome (GBr) Team Sky 0:07:30 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ ရနုိုင်တယ်လို့မှန်းထားတဲ့ Christopher Froome (GBr) Team Sky ရော၊ Nairo Quintana (Col) Movistar Team ပါ အခုလုို နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အတွက် ဒီနေ့ အနီ ရောင်ရသွားသူ Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က အလားအလာအကောင်းဆုံးလုို့ ပြောရမလုိုဖြစ်သွားပါတယ်။
တကယ်တော့ အနီရောင်ရသွားသူ Fabio Aru (Ita) နဲ့ ပထမ ရသူ Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team ဆုိုတာဟာ လူသစ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလက အီတလီ မှာကျင်းပတဲ့ Giro d'Italia ပွဲမှာ ကောင်းကောင်းခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Astana အတွဲပါ။ Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo အသင်းက ၂ မီနစ်နီးပါးအသာနဲ့ ပထမရသွားပြီး သူတုို့ ၂ ဦးက ကပ်ရှုံးခဲ့တာပါ။
ဒါအပြင် ဒီပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးဟာ Tour de France ပွဲကိုတောင် ၀င်မပြိုင်ပဲ ဒီစပိန်ပွဲအတွက် အချိန် ယူလေ့ကျင့်ထားတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၁ ရက်တာပွဲပြီးရင် Astana စုံတွဲကပဲ အနီ ရောင်ကိုယူသွားမဲ့အလားအလာများနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အချိန်က နောက်ထပ် ၁၀ ရက်ကျန်သေးတဲ့အတွက် Tour de France မှာ ဒု-တ ရထားတဲ့ Movistar Team အတွဲ Alejandro Valverde (Spa) နဲ့ Nairo Quintana (Col) တုို့ မရနုိုင်ဘူးဆုိုပြီး အပြတ်ပြောလို့တော့မဖြစ်နုိုင်သေးပါဘူး။ တခါ အခု ဒုတိယ ရထားသူ Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha ကုိုလဲ လျော့တွက်လုို့မဖြစ်ပါဘူး။
တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီနေ့ အနီရောင်အကျီကုို စွန့်လုိုက်ရသူ Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin၊ ပုိုလန်မှနာမည်ကြိး Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo နဲ့ Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge တုို့ကိုလဲ မေ့ထားလုို့မဖြစ်ပါဘူး။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Escaldes-Engordany. Andorra ကနေ Lleida အထိ 173 km ကိလုို မီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
ဒဏ်ရာကြောင့် Chris Froome ဆက်မစီးနုိုင်တော့ပါ...။
စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ ဧရာမတောင် တက်ပွဲအစပုိုင်းမှာ ချော်လဲပြီး လမ်းဘေးတံတုိုင်းနဲ့ဆောင့်မိလုို့ ဒဏ်ရာသွား တဲ့ Tour de France ချန်ပီယံ၊ လက်ရှိပွဲမှာလဲ ပထမ ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေး ပေးခံထားရသူ Sky အသင်းခေါင်းဆောင် Chris Froome ဒီနေ့ ဆက်စီးနုိုင် မနုိုင် မသိရသေးပါ။
မနေ့ညနေ ကဓာတ်မှတ်ရုိုက် ဆေးစစ်မှုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ အဖြေမသိရသေးပါ။ ဒါကြောင့် ဒီမနက် (ကြာသပတေးမနက်) ဆေးစစ်မှုထပ်လုပ်ပြီးမှ သူရဲ့ ပခုံး ဒဏ်ရာအခြေအနေကုိုအသေချာသိနုိုင်မယ်လို့ Sky အသင်းကပြောပါတယ်။
ဒီဒဏ်ရာကြောင့် သူဟာ လမ်းတ၀က်အထိပဲရှေ့ဆောင်စီးနုိုင်ပြီး ကီလုို ၅၀ အလုိုမှာ လုံးဝ မထိမ်းနုိုင်ပဲ အရှိန်ကျသွားပါတယ်။ ပန်းဝင်ချိန် ၉ မီနစ်နီးပါး နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနီရောအကျီပုိုင်ရှင်အသစ် Aru ရဲ့နောက် ၇ မီနစ်ခွဲအထိပြတ်ပြီး နေရာ ၁၅ အထိ ကျသွားပါတယ်။ ဒီ ၇ မီနစ်ကို ကျန်တဲ့ ၁၀ ရက်အတွင်း ပြန်ဖြည့်နုိုင်ဖုို့ဆုိုတာ သိပ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။
(အခုနောက်ဆုံး ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၁၀ နာရီကျော်ကျော်လေးမှာ ၀င်လာတဲ့သတင်းတွေ အရ Chris Froome ပွဲကနေ ထွက်လုိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဆေးစစ်ချက်အရ ဒဏ် ရာရတဲ့ ခြေသလုံးမှာ အရိုးတခု ကျိုးနေတယ်သိရပါတယ်..)။
ထိခုိုက်ဒဏ်ရာရာမှုအကြောင်း နောက်တခုကိုဆက်ပြောရရင် Tinkoff-Saxo အသင်းမှ Sergio Paulinho ဟာ မနေ့ကပွဲစဉ်အတွင်း ဆုိုင်ကယ်နဲ့တုိုက်မိပြီး ဒဏ်ရာပြင်းတဲ့အတွက် ဆက်မစီးနုိုင်ပဲ ပွဲကနေထွက်လုိုက်ရပါတယ်။
ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်းက Tinkoff-Saxo အသင်းရဲ့ တာတုိုဘုရင် Peter Sagan ဆုိုက်ကယ်အတုိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက် Tinkoff-Saxo အသင်း သား နောက်တဦး ဆက်တုိုက်အတုိုက်ခံရတာပါ။
ဒီဖြစ်စဉ်ကုို အသင်းပုိုင်ရှင် Oleg Tinkov က အလွန်ဒေါသထွက်နေပြီး ဒီလုို သာဆက်ဖြစ်နေရင် စပိန်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရလိမ့်မယ်။ ပွဲကနေ သူ့အသင်း ကိုပြန်ခေါ်ရလိမ့်မယ်လို့ Twitter ကနေ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုနောက်ပုိုင်း သတင်းတွေအရဆုိုရင် BMC အသင်းကလဲ အလားတူပြောဆုိုခဲ့တယ်လုို့ဆုို ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မယ်၊ စက်ဘီးသမားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်အလေးထားစဉ်းစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ UCI ဖက်က ပြောဆုိုထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၁၂ ရက်မြောက်နေ့ Danny Van Poppel အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၂ ရက်မြောက်နေ့မှာ Danny Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing က 4:02:11 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge နဲ့ Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal တုို့က နှာတဖျားစီနောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရပါတယ်။ ပီတာ ဆာဂန်ထွက်သွားပြီးနောက် နာမည်အကြီးဆုံးကျန်နေတဲ့ Sprinter ဂျာမနီမှ John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin ကတော့ လမ်းကြောင်းပိတ်မိပြီး နံပတ် ၅ နဲ့ ကျေနပ်လုိုက်ရပါတယ်။
၁၂ ရက်ပေါင်း ပထမ အနီရောင်အကျီကုိုတော့ Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က ထိမ်းထားဆဲပါ။
ပွဲမစခင်မှာတော့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့အတုိုင်း မနေ့ကလဲပြိုမှုအတွင်း ဒဏ်ရာရခဲ့သူ Tour de France ချန်ပီယံ hris Froome (Team Sky) ဒီနေ့ ဆက်မစီးနုိုင်တော့ပဲ ပွဲကနေ ထွက်သွား ခဲ့ရပါတယ်။
Andorra ကနေ Lleida အထိ 173 km ကိလုို မီတာပွဲစဉ်ဟာ မနေ့က ဧရာမ တောင်တွေ နဲ့စာရင် တောင်တလုံးပဲရှိတဲ့အတွက် မြေပြန့်ပွဲ၊ Sprinter တွေ အနုိုင်ရမဲ့ပွဲလုို့ ကျွမ်းကျင်သူ တွေက ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တာထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာကတည်းက ၅ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားလုိုက်တာ ပန်းဝင်ဖုို့ မီတာ ၅၀၀ ၀န်းကျင်အထိပါပဲ။ သူတုို့ ၅ ဦးဟာ အပြန် အလှန်ဟန်ချက်ညီစီးရင်းနဲ့ အရှိန်ကုိုတင်သွားလုိုက်တာ ၃ မီနစ်ကျော်အထိ Peloton ကုိုဖြတ် ထားနုိုင်လုိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အနီရောင်အကျီုပုိုင်ရှင် Aru တုို့ရဲ့ Astana အသင်းက မီအောင်လုိုက်ဖုို့မကြိုးစားတဲ့ အပြင် လုိုက်ဖုို့ပြင်သူတွေကိုပါ ပြန်ထိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ၁၀ ကီလုိုလောက်သာ ကျန်တော့တဲ့အထိ အာစတာနာက မလုိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Sprinter အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Degenkolb ရဲ့ Giant-Alpecin နဲ့ Trek Factory Racing တုို့ ရှေ့တက်ပြီးလုိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတုို့အရှိန်တင်တာ သိပ်နောက်ကျသွားပုံရပါတယ်။ ၅ ဦးအဖွဲ့ကပြေးမြဲတုိုင်း ဆက်ပြေးနေတာ ပန်းဝင်ဖုို့ မီတာ ၅၀၀ လောက်ကျန်တဲ့အထိ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့မှ Maxime Bouet (Etixx-Quick Step) နဲ့ Jaco Venter (MTN-Qhubeka) တုို့က ရှေ့မှာ ၁၀ မီတာခန့်ဖြတ် ပြီးပြေးနေဆဲပါ။
ဒါပေမဲ့ Peloton ကုိုဦးဆောင်လာတဲ့ Sprinter တွေရဲ့အရှိန်ဟာ အံ့မခန်းမြန်လာပြီး ပန်းဝင် စည်းနားရောက်ဖုို့ ၂၀ မီတာလောက်အလုိုမှာ ရှေ့ပြေး ၂ ဦးကိုကျော်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Maxime Bouet (Etixx-Quick Step) ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။ ကီလုို ၁၇၀ ကျော်ကုို တနေ့လုံး ဦးဆောင်စီလာခဲ့ပြီးမှ ပန်းဝင်ခါနီး ၁၀ မီတာလောက်မှာ အဖြတ်ခံ လုိုက်ရတာ ဘယ်လောက်ရင်နာဖုို့ကောင်းသလဲ။
၁၂ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားသူတွေကတော့...
1 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 47:14:30
10 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:04:15 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Catalayud ကနေ Tarazona အထိ 178 km ကီလုိုမီတာကုို ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေ ၄၀၀၀ ကျော်နဲ့ ၃၀၀၀ ကျော်တောင် ၂ လုံးပါတဲ့အတွက် တောင်တင်ဘုရင်တွေ၊ အထူးသဖြင့် GC သမားတွေ အကြိတ်အနယ်ပြိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၁၃ ရက်မြောက်နေ့ Nelson Oliveira အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida က 4:14:01 နာရီနဲ့ တကိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits နဲ့ Nicolas Roche (Irl) Team Sky တုို့က 0:01:00 မီနစ်စီနောက်ကျပြီး ဒုတိယ နဲ့ တတိယ ရပါတယ်။
၁၃ ရက်ပေါင်း ပထမ အနီရောင်အကျီကိုတော့ Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က မနေ့ကလုိုပဲ ဆက်ထိမ်းထားဆဲပါ။ စိတ်ဝင်စားဖုို့ကောင်းတာက Chris Froome ဒဏ်ရာကြောင့်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် သူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဖက် အဖြစ်ကျန်ခဲ့သူ Nairo Quintana (Col) Movistar Team ဟာ ကုိုယ်ပူတာ၊ ဗုိုက်အောင့်တာတွေကြောင့် ခဏအနားယူခဲ့ရတဲ့အတွက် ပန်းဝင်ချိန်နောက် ကျခဲ့ရပြီး GC 1-10 စာရင်းထဲကနေ ၁၁ အထိကျသွားခဲ့ရပါတယ်။
Catalayud ကနေ Tarazona အထိ 178 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲအတွင်း ပေ ၄၀၀၀ နဲ့ ပေ ၃၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ တောင်နှစ်လုံးပါတာကြောင့် တောင်တက်ဘုရင်တွေ၊ အထူးသဖြင့် GC သမားတွေအကြိတ်အနယ်ပြိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ အကဲခတ်တွေက ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါ တယ်။
ဒါပေမဲ့ ထင်သလုိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ လူ ၂၀ ကျော်ပါတဲ့ Breakaway အဖွဲ့တခု ကီလုို ၄၀ ၀န်း ကျင်ကတည်းက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားလုိုက်တာ ပန်းဝင်တဲ့အထိ Peloton က ပြန် မဖမ်းနုိုင်တော့ပါဘူး။
၂၄ ဦးထဲက ပထမ ရသူဟာ အုပ်စုကုို တမီနစ်အထိဖြတ်ပြီး ပန်းဝင်ခဲ့တာပါ။ ကျန် ၂၃ ဦးက ဆက်တုိုက်လုိုပန်းဝင်ပြီး အနီရောင်အုပ်စုကတော့ ၅ မီနစ်နီးပါးနောက်ကျပြီးမှ ပန်းဝင်လာခဲ့ ပါတယ်။
၁၃ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
11 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:03:07 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Vitoria/ Alto Campoo ကနေ Fuente del Chivo အထိ 215 km ကီလုို မီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ တလျောက်လုံး တောင်တက် သိပ်မရှိပဲ ပန်းဝင်ဖုို့ ကိလုို ၅၀ အလုိုမှာ ပေ ၃၀၀၀ တလုံးနဲ့ ပန်းအ၀င် တောင်အဖြစ် ပေ ၆၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့တောင်တွေကို တက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Breakaway သာ ဒီနေ့လုိုမပြေးနုိုင် ရင်တော့ GC သမားတွေ၊ တောင်တက်ဘုရင်တွေ ရမဲ့ပွဲတခုဖြစ်လာနုိုင်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၁၄ ရက်မြောက်နေ့ De Marchi အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၄ ရက်မြောက်နေ့ တောင်တက်ပြိုင်ပွဲမှာ Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team က 5:43:12 နာရီနဲ့ တကိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Salvatore Puccio (Ita) Team Sky က 0:00:21 စက္ကန့် နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Team Movistar က 0:00:32 စက္ကန့်နောက် ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။
သူတုို့ ၃ ဦးစလုံးဟာ ၅ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့ကဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖုို့ ကောင်းတာက တော့ အနီရောင်အကျီအုပ်စုရဲ့ အကြိတ်အနယ်ပြိုင်ပွဲပါ။ ကျ နော် TV ရှေ့ရောက်ချိန်မှာ ပန်းဝင်ဖုို့ ၁၅ ကီလုိုပဲကျန်ပြီး Breakaway ၅ ဦးက ၉ မီနစ်ခွဲအထိ ပြတ်နေပါတယ်။
ဒီတုိုင်းဆုိုရင်တော့ ဒီရှေ့ပြေးအဖွဲ့ကို Peloton က ဘယ်လုိုမှ မမီနုိုင်တော့ဘူးလုို့ တွက်ဆလုိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပန်းဝင်တောင်ဟာ ၁၀ ကီလုိုလောက်ရှည် ပြီး ပေ ၆၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့အတွက် ရှေ့ပြေးအဖွဲ့တဖြေးဖြေးအရှိန်ကျလာပြီး Peloton က တဖြေးဖြေး အရှိန်တက်လာပါတယ်။
၁၀ ကီလုိုအလုိုမှာ Gap က ၈ မီနစ်ကျော်ကျော်ပဲကျန်ပါတယ်။ ရှေ့ပြေး ၅ ဦးက မခုိုမကန့်ပဲ အပြန်အလှန်ဟန်ချက်ညီစီးရင်းနဲ့ ပြေးလုို့ကောင်းဆဲ။ ဒါပေမဲ့ ၅ ကီလုိုအလုိုမှာတော့ Gap က ၅ မီနစ်ကျော်ပဲကျန်ပါတယ်။ ၄ ကီလုိုအလိုမှာ တော့ ၅ ဦးဟာ ဟန်ချက်ညီမစီးတော့ပဲ အချင်းချင်းစတင်တုိုက်ခုိုက်ပြီး ထွက် ပြေးကြပါတယ်။
ပထမ ဆုံးထွက်ပြေးသူဟာ Mickaël Chérel (Fra) AG2R - La Mondiale ဖြစ်ပြီး ၁၀ စက္ကန့်လောက်အထိ ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးနုိုင်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ၅ ဦးစလုံး တအုပ်တည်းပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပန်းဝင်ဖုို့ ၂ ကီလုိုအလိုမှာတော့ တကယ့် ကိုအသေအလဲ ဖြတ်ပြေးကြပါတယ်။ တောင်ကမြင့်၊ ရာသီဥတုကအေးပြီး မြူဆုိုင်းလာ တဲ့အတွက် စက်ဘီးသမားတွေ တဦးနဲ့တဦးတောင် ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့တဲ့အထိပါပဲ။
ပထမ ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပန်းဝင်ချိန်မှာ အနီရောင်အုပ်စုက ၃ မီနစ်လောက်ပြတ်နေဆဲ ပါ။ ၁၀ ကီလုိုလောက်အလိုအထိ လူ ၁၀၀ ကျော်စလုံး တအုပ်တည်းဖြစ်နေဆဲ Peloton ဟာ ပန်းဝင်တောင် စအတက်မှာကတည်းက ၂ အုပ်ကွဲသွားပါတယ်။
ပထမ အုပ် အနီရောင်အုပ်စုမှာ လူ ၅၀ ခန့်ပါလာပြီး ပန်းဝင်ဖုို့ ၅ ကီလုို အလုိုမှာ တော့ ၂၀ ကျော်ပဲကျန်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Fabio Aru (Ita) က စထွက်ပြေး ပါတယ်။ Nairo Quintana (Col)နဲ့ Tinkoff-Saxo မှ တဦး ချက်ချင်းထလုိုက်နုိုင်ပေမဲ့ ကျန်လူအားလုံးပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပုိုင်းမှာတော့ Quintana က အရှိန်တင်ထွက်ပြေးပြီး ပန်းအရင် ၀င်သွား နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မနေ့ကအထိ ကုိုယ်ပူ၊ ဗုိုက်နာဖြစ်နေတဲ့ ကိုလံဘီယာ စက်ဘီးသမားဟာ ဒီနေ့တော့ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်လာပုံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနီရောင်အကျီကို တော့ Fabio Aru (Ita) ကပဲ ဆက်ထိမ်း ထားဆဲပါ။
၁၄ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
2 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:00:26
3 Tom Dumoulin (Ned) Giant-Alpecin 0:00:49
4 Esteban Chaves (Col) Orica-GreenEdge 0:01:29
5 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 0:01:33
6 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:02:10
7 Alejandro Valverde (Spa) Team Movistar 0:02:11
8 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha 0:02:13
9 Nairo Quintana (Col) Team Movistar 0:03:00
10 Romain Sicard (Fra) Team Europcar 0:03:39 တို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Comillas ကနေ Sostres. Cabrales အထိ 175.8 km ကီလုိုမီတာကုို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ပုိုင်း ကီလုို ၁၀၀ စလုံး မြေပြန့်ဖြစ်ပြီး ပန်းဝင်ခါနီး တောင် ၃ လုံးအနက် နေက်ဆုံးတောင်က တော့ ပေ ၄၀၀၀ နိးပါးမြင့်ပါတယ်။ ဒီနေ့လုိုမျိုး ပန်းအ၀င်မှာ GC သမားတွေ၊ အထူးသဖြင့် အရူနဲ့ ကင်တားနား အကြိတ်အနယ်ပြိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ရပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ Joaquin Rodriguez အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၅ ရက်မြောက်နေ့ တောင်တက်ပြိုင်ပွဲမှာ နာမည်ကြီး GC သမားတဦးဖြစ်သူ Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha က 4:33:31 နာရီနဲ့ တကိုယ် တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ တခြား နာမည်ကြီး GC သမားတွေဖြစ်တဲ့ Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo က 0:00:12 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha က 0:00:14 စက္ကန့်နောက်ကျ ပြီး တတိယ ရပါတယ်။ နံပတ် ၄ နဲ့ ၅ ကတော့ အဓိက GC ပြိုင်ဖက် Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team နဲ့ Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team တုို့က ၁၅ စက္ကန့်စီနောက်ကျပြီး ပန်းဝင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ပထမ ရသွားတဲ့ Joaquin Rodriguez (Spa) ဟာ အနီရောင်အကျီပုိုင် ရှင် Fabio Aru (Ita) ကုို မနေ့က ၂၆ စက္ကန့်ပြတ်နေပေမဲ့ ဒီနေ့ ပထမ ရတာ ကြောင့် ၁၀ စက္ကန့် time bonus ထပ်ရပါတယ်။ တခါ ဒီနေ့ Fabio Aru (Ita) ကုို သူထပ်ဖြတ်နုိုင်တဲ့အချိန်က ၁၅ စက္ကန့်ဆုို တော့ ၂၅ စက္ကန့်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Fabio Aru (Ita) ကုိုမီဖုို့ ၁ စက္ကန့်လုိုနေသေးတဲ့အတွက် အနီရောင်အကျီကုို မရလုိုက်ပဲဖြစ်သွားပါတယ်။
Comillas ကနေ Sostres. Cabrales အထိ 175.8 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲ အတွင်း ပထမ ကီလုို ၁၀၀ လောက်ဟာ မြေပြန့်ဖြစ်ပေမဲ့ ကျန်တဲ့ ၇၀ အတွင်းမှာတော့ ပေ ၂၀၀၀ ကျော်မြင့် တဲ့တောင်တလုံးနဲ့ ပေ ၄၀၀၀ နီးပါးမြင့်တဲ့ ပန်းဝင်တောင်တလုံးရှိပါတယ်။
စက်ဘီးသမားအများစုဟာ မနေ့ကလုိုပဲ Breakaway အဖြစ်ထွက်ပြေးပြီး ပထမ ရအောင် ကြိုးစားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဒီလုိုနဲ့ ကီလုို ၅၀ လောက်အရောက်မှာ ၉ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု စတင်ထွက်ပြေုးုနိင်ခဲ့ပါတယ်။
ပန်းမ၀င်ခင် ကီလုို ၅၀ အတွင်း ၅ မီနစ်နီးပါးအထိပြတ်အောင် Peloton ကိုဖြတ်ထားနုိုင်ခဲ့ပေ မဲ့ မနေ့ကလုို ၁၀ မီနစ်အထိဖြစ်အောင် မလုပ်နုိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီနေ့ Peloton ကုို အဓိကဦးဆောင် ခဲ့တဲ့ Movistar အသင်းကလဲ မနေ့ကလုို ၁၀ မီနစ်အထိ အပြတ်မခံတော့ပါဘူး။
ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၂၀ မှာ ၂ မီနစ်ဝန်းကျင်အထိ Gap ကျသွားအောင် Movistar အသင်းကစွမ်း ဆောင်နုိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀ ကီလုိုအလုိုမှာတော့ အသင်းခေါင်းဆောင် Quintana ကုိုယ်တုိုင် ရှေ့ကုို တက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Aru ရဲ့ Astana အသင်းသားတွေက သူကိုပြန်ဖမ်းထားနုိုင်တဲ့ အတွက် ပြေးမလွတ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလုိုနဲ့ နောက်ဆုံးပန်းဝင်တောင်ရဲ့ နောက်ဆုံး ၂ ကိလုိုကျမှ အခု ပထမ ရသူက အရှိန်တင် ပြေး လွတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၅ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
1 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 61:53:56
2 Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha 0:00:01
3 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 0:01:24
4 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin 0:01:25
5 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica GreenEdge 0:01:34
6 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 0:02:08
7 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky 0:02:19
8 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 0:02:25
9 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:03:00
10 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:05:07 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ Luarca ကနေ Ermita del Alba. Quirós အထိ 185 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ပုိုင်းမှာ ပေ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင် တောင် ၅ လုံးကိုဖြတ်ရ မှာ ဖြစ်ပြီး ပန်းဝင်ခါနီး တောင် ၂ လုံးကတော့ ပေ ၃၀၀၀ ကျော်စီခန့်မြင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် GC သမားတွေ၊ အထူးသဖြင့် အနီရောင်နဲ့ ၃ မီနစ်ပြတ်နေတဲ့ ကုိုလံဘီယာချန်ပီယံ Quintana (Col) Movistar က ဒီနေ့ ကောင်းကောင်းခြေစွမ်းပြလိမ့်မယ်လုို့ ဟောကိန်း ထုတ်လုိုက်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ ဒုတိယ သတင်းပတ်အတွက် နားရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ Frank Schleck အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ တောင်တက်ပြိုင်ပွဲမှာ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ၀ါရင့်စက်ဘီးသမား Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing က 5:49:56 နာရီနဲ့ တကုိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Rodolfo Torres (Col) Colombia က 0:01:10 မ်ီနစ် နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team က 0:01:48 နောက်ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။
သူတို့ ၃ ဦးစလုံးဟာ မီနစ် ၂၀ ကျော်အထိဖြတ်ထွက်ပြေးနုိုင်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ သူတုို့နောက်မှာတော့ အနီရောင်အကျီ အုပ်စုရဲ့ပြိုင်ပွဲက အကြိတ်အ နယ်ရှိလှပါတယ်။
မနေ့က တစက္ကန့်အသာနဲ့ အနီရောင်ကိုထိမ်းထားနုိုင်ခဲ့တဲ့ Fabio Aru (Ita) ဟာ ဒီနေ့မှာ တော့ ပြိုင်ဖက် Joaquim Rodriguez (Spa) ကုို ဆက်မထိမ်းနုိုင် တော့တဲ့အတွက် တစက္ကန့်အရှုံးနဲ့ အနီရောင်ကုို စွန့်လုိုက်ရပါတယ်။
Luarca ကနေ Ermita del Alba. Quirós အထိ 185 km ကီလုိုမီတာ ပြိုင်ပွဲအတွင်း ပထမ ပုိုင်းမှာ ပေ ၁၀၀၀ ကျော်စီမြင့်တဲ့ တောင် ၅ လုံးနဲ့ ပန်းဝင်ခါနီးမှာ ပေ ၃၀၀၀ နီးပါးမြင့်တဲ့ တောင် ၂ လုံးရှိတဲ့အတွက် တောင် ၇ လုံးတက်ရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ ပုိုင်းမှာကတည်းက ၁၀ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာ ခရီး သုံးပုံတပုံ သုို့မဟုတ် ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၁၂၀ ၀န်းကျင်မှာ မီနစ် ၂၀ နီးပါးအထိ Peloton ကုိုဖြတ်ထား နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ၁၀ ဦးထဲမှာ အနီရောင်အကျီကို လုနုိုင်တဲ့သူ တဦးမှ မပါတဲ့အတွက် သူတို့ကုိုအမီလုိုက်ဖုို့ Peloton က စိတ်ဝင်စားပုံမပြခဲ့ပါဘူး။
လက်ရှိအနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Aru ရဲ့ Astana အသင်းက ဦးဆောင်ပြီးလုိုက်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် အနီရောင်ရဖုို့ တစက္ကန့်သာလုိုတော့တဲ့ Rodriguez ရဲံ Team Katusha က ဦးဆောင်လုိုက်မလားဆုိုပြီး အချင်းချင်းတွယ်ကပ်နေရင်းနဲ့ အမီလုိုက်ချိန် နောက်ကျသွား တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
နောက်ပုိုင်းမှာတော့ Peloton ထဲမှာ ၁၅ ဦးလောက်ပဲ ကျန်တဲ့အထိဖြတ်ထားနုိုင်ခဲ့ပြီး ပန်းဝင် တောင်ကုန်းမှာအကြိတ်အနယ်ပြိုင်ကြပါတယ်။ Rodriguez ကုို Aru ဘယ်လုိုမှ မလုိုက်နုိုင်တဲ့ အတွက် ၂ စက္ကန့်နောက်ကျနဲ့ အနီရောင်အကျီကုို စွန့်လုိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သဖက်ခါ တဦး ချင်းစံချိန်ပြုပွဲကျရင် အနီရောင်ကုို သူပြန်ရနုိုင်ပါတယ်လုို့ အရူက ဆုိုထားပါတယ်။
အနီရောင်သမားတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖုို့ကောင်းသလုို ဒီနေ့ ပထမ ရသွားတဲ့ Frank Schleck (Lux) ကလဲ ခေသူမဟုတ်ပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က Tour de France မှာ ပထမ ရနုိုင်ခြေ ရှိရဲ့နဲ့ ကံခေပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ရသွားတဲ့ လူဇင်ဘတ်က အမွှာညီအကို စက်ဘီးသမားတွေ အဖြစ် လူသိ များပါတယ်။ ဒီနေ့အောင်ပွဲဟာ ၄ နှစ်အတွင်း သူရဲ့ ပထမ ဆုံးအကြိမ် ဧရာမ အောင်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၆ ရက်တာပွဲအပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
10 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:05:22 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ ဒုတိယ သတင်းပတ်အတွက် နားရက်ဖြစ်ပါတယ်။ သဖက်ခါ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ မှာတော့ Burgos ကနေ Burgos အထိ 38.7 km ကီလုိုမီတာ တဦးချင်းစံချိန်ပြု ITT ပွဲကုို ယှဉ်ပြိုင်ကြဖုို့ရှိနေပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña မှာ အနီရောင်အကျီ ဘယ်သူ ရနုိုင်သလဲ...။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña စက်ဘီးပွဲရဲ့ ဒုတိယ သတင်းပတ် နားရက်မှာ ဒီမေးခွန်းကုို လူတွေစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
မနေ့က ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ တောင်တက်ပြိုင်ပွဲအပြီး ဒီနေ့မှာတော့ တဦးချင်း စံချိန်ပြု ITT ပွဲ နွဲရဖုို့ရှိနေပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆုိုရင်တော့ နည်းစနစ်ပုိုင်း မတူတဲ့အတွက် တောင်တက်ဘုရင်တွေဟာ စံချိန်ပြုပွဲမှာ ကောင်းလေ့မရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ စံချိန်ပြုဟာ တခါတခါ ပွဲကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသွားတတ်တဲ့အတွက် GC သမားတွေအတော်များများ အခုနောက်ပုိုင်းမှာ စံချိန်ပြုပွဲကုိုလဲ အသေ အချာလေ့ကျင့်ထားကြတယ်လို့ဆုိုပါတယ်။
၁၆ ရက်တာပွဲအပြီး GC သမားတွေကိုတန်းစီပြီးဟောကိန်းထုတ်ရမယ်ဆုိုရင် ...
၁- Joaquim Rodríguez (Katusha), race leader။
မနေ့ကမှ အနီရောင်အကျီကုို ပူပူနွေးနွေးရထားတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံသား Rodríguez ဟာ ဒီနေ့ ကျင်းပမဲ့ စံချိန်ပြုပွဲပြီးရင် ဒီအကျီကိုဆက်ထိမ်းထားနုိုင် မနုိုင် မသေ ချာလှပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင် သူဟာ တောင်တက်ကောင်းပေမဲ့ စံချိန်ပြုပွဲ ကောင်းတယ်လို့ ရာဇ၀င်မရှိသေးလုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူရဲ့တောင်တက်အားက ကျန်တဲ့ ၃ ရက် တောင်တက်ပွဲတွေမှာ အကျီ အနီကုို ပြန်လုယူကောင်းယူနုိုင်လိမ့်မယ်လုို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
၂- Fabio Aru (Astana), at 1 second ။
မနေ့ကပွဲမှာ တစက္ကန့်ပြတ်ပြီး အနီရောင်အကျီကုို စွန့်လုိုက်ရတဲ့ အီတလီ နုိုင်ငံ သား Aru ဟာ အနီ ရောင်အကျီရဖုို့ အလားအလာအကောင်းဆုံးလုို့ ထင်ပါ တယ်။ သူဟာ ဒီပွဲအ တွက် အချိန်ယူလေ့ကျင့်နေတာကြောင့် Tour de France ကုိုတောင် မ၀င်ခဲ့ပါ ဘူး။ ဒါအပြင် တဦးချင်းစံချိန်ပြုအတွက်လဲ သူဟာ အသေအချာလေ့ကျင့်ထား တယ်လုို့ဆုိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ပွဲပြီးရင် Aru အနီရောင်ပြန်ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ ၃ ရက် တောင်တက်ပွဲမှာ သူ ဆက်ထိမ်းထားနုိုင်ပါ့မလားဆုို တာကတော့ မသေချာလှပါဘူး။ ကံကောင်းတာကတော့ Astana အသင်းဟာ သူ့ကုို ကောင်းကောင်းကူညီပေးနုိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၃- Rafal Majka (Tinkoff-Saxo), at 1:35
Tinkoff-Saxo အသင်းခေါင်းဆောင်သစ် ပုိုလန်နုိုင်ငံသား Rafal Majka ဟာ အရင်က GC အတွက် တခါမှအသေအချာမစီးဖူးသေးပါဘူး။ အသင်းခေါင်း ဆောင် ကွန်ဒါတာ မပါတဲ့အတွက် သူဦးဆောင်စီးရာကနေ မမျှော်လင့်ပဲ ခြေတွေစွတ် ကောင်းနေပါတယ်။ အခုတုိုင်းဆုိုရင်တော့ သူဟာ မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ အနီရောင် ရကောင်းရသွားနုိုင်ပါတယ်။
၄- Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) at 1:51
နံပတ် ၄ နေရာကနေ ကပ်လုိုက်နေသူတဦးကတော့ ဒေါင်ကောင်း၊ အရပ် ကောင်းလှတဲ့ နယ်သာလန်သားပါပဲ။ သူဟာ တဦးချင်းစံချိန်ပြုလဲ အတော် ကောင်းတဲ့အတွက် ဒီနေ့ပွဲပြိးရင်တောင် အနီရောင်အကျီ ရကောင်းရနုိုင်တယ် လို့ ခန့်မှန်းခံနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ တောင်တက် ၃ ရက်မှာ သူထိမ်းနုိုင် ပါ့မလားဆုိုတာကတော့ မသေချာလှပါဘူး။
၅- Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:03:11
http://www.cyclingnews.com က ခန့်မှန်းထားတာကတော့ အပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ် ၄ ဦးတည်းပါ။ နံပတ် ၅ နေရာ (တကယ်တော့ ၃ မီနစ်ကျော်ပြတ်ပြီး နံပတ် ၈ နေရာရောက်နေသူပါ) က ကင်တားနားကိုတော့ စာရေးသူကြိုက်လုို့ ထည့်ရွေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ Tour de France တုန်းကဆုိုရင် ချန်ပီယံ ဖရူးကို ပြတ်ကျန်ခဲ့ တဲ့အချိန်က ဒီထက်တောင်များပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းပတ် အတွင်း သူအရှိန်တင်လုိုက်ခဲ့တာ အံ့သြလောက်အောင်ကုို မြန်လှပါတယ်။ တခါ သူဟာ နေမကောင်းတာ၊ ၀မ်းကုိုက်တာတွေကြောင့် ဒုတိယ သတင်းပတ် အတွင်း ကောင်းကောင်းမစီးနုိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် လာမဲ့ တောင်တက်ပွဲ ၃ ရက်မှာ သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကောင်းကောင်းတွေ့ ရလိမ့်မယ်။ ပထမ မရရင်တောင် Tour de France လုိုမျိုး ဒုတိယလောက် တော့ ရနုိုင်သေးတယ်လို့ မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၁၇ ရက်မြောက်နေ့ Tom Dumoulin အနီရောင် ပြန်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၇ ရက်မြောက်နေ့ တဦးချင်းစံချိန်ပြုပွဲ ITT မှာ Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin က 0:46:01 မီနစ်နဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
Maciej Bodnar (Pol) Tinkoff-Saxo က 0:01:04 နာရီနောက်ကျပြီး ဒုတိယ နဲ့ Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team က 0:01:08 မိနစ်နောက် ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။
မနေ့ညနှောင်းပုိုင်းက ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတုိုင်းပါပဲ။ ဒေါင်ကောင်း၊ အရပ် ကောင်းပြီး ITT တဦးချင်းစံချိန်ပြုမှာ စံချိန်ကောင်းလှတဲ့ နယ်သာလန်သား Tom Dumoulin (Ned) က ပထမ ရသွားပါတယ်။ စံချိန်က ထင်ထားတာ ပုိုကောင်းတဲ့အတွက် တနေ့တာ ပထမ အပြင် ၁၇ ရက်ပေါင်း ပထမ အနီရောင်အကျီကုိုပါ ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအနီရောင်အကျီပုိုရှင် Joaquim Rodriguez (Spa) ကတော့ မနေ့က မှန်းခဲ့တဲ့ အတုိုင်း တဦးချင်းစံချိန်ပြုပွဲအခြေအနေ တုိုးတက်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ 3:06 မီနစ်အထိ နောက် ကျသွားပါတယ်။ တခါ တတိယ နေရာကလုိုက်နေသူ Majka (Pol) ကလဲ 2:38 မီနစ် နောက်ကျ သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ ဒုတိယ နေရာကလုိုက်နေသူ Aru (Ita) ကတော့ 1:53 မီနစ်သာနောက်ကျတဲ့အတွက် အရင်ရထားတဲ့အချိန်တွေကိုနှုတ်လုိုက်တဲ့အခါ ၃ စက္ကန့် ပဲ Gap ရှိတာကြောင့် အနီရောင်အတွက် မျှော်လင့်ချက် အရှိဆုံးနေရာမှာ ရှိနေဆဲပါ။
GC အုပ်စုထဲက ဒီနေ့ပွဲအတွင်း နောက်ထပ်အလားအလာကောင်းလာသူတွေကတော့ တတိယ ရတဲ့ Alejandro Valverde (Spa) Movistar နဲ့ နံပတ် ၆ နေရာကနေ ပန်းဝင်တဲ့ Nairo Quintana (Col) Movistar တုို့ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကင်တားနားဟာ နံပတ် ၉ နေက နံပတ် ၅ အထိရောက်လာပြီး Gap 0:02:53 မီနစ်ပဲ ကျန်ပါတယ်။
၁၇ ရက်တာပွဲအပြီး သုို့မဟုတ် ပွဲပြီးဖုို့ ၄ ရက်အလုိုအထိ ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့....
1 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin 68:40:36
3 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:01:15
4 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 0:02:22
5 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:02:53
6 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:03:15
7 Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge 0:03:30
9 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:04:10
10 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:06:51 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Roa ကနေ Riaza အထိ 204 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင် ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကီလုို ၁၀၀ ၀န်းကျင်မှာ ပေ ၃၀၀၀ ၀န်းကျင်တလုံးနဲ့ ပန်းဝင်ခါနီး ကီလုို ၁၉၀ မှာ ပေ ၄၀၀၀ နီးပါးမြင့်တဲ့ တောင်တလုံးအပါဝင် စုစုပေါင်း တောင် ၅ လုံးလောက်ကုို ကျော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်ဖြန်ပွဲမှာ တောင်တက်ဘုရင်တွေ၊ အထူးသဖြင့် အမှတ်ပြတ်နေဆဲ GC သမားတွေ အကြိတ်အနယ်ပြိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
သဖက်ခါ ၁၉ ရက်မှာလဲ အလားတူတောင်တွေရှိပါတယ်။ ၂၀ ရက်နေ့ပွဲမှာဆုိုရင်တော့ တောင်တွေက ပုိုမြင့်၊ ပုိုများတဲ့အတွက် မနက်ဖြန်ကနေ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ပွဲတွေဟာ အနီရောင်အကျီ ဘယ်သူရမလဲဆုိုတာကုို အဆုံးအဖြတ်ပေးမဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လုို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ ထုံးစံ အတုိုင်း အကြိတ်အနယ်မပြိုင်တော့ပဲ အလှပဲစီးကြပါလိမ့်မယ်။ ။
VueltaaEspaña ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ Nicolas Roche အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၈ ရက်မြောက်နေ့ တောင်တက်ပြိုင်ပွဲမှာ Nicolas Roche (Irl) Team Sky က 5:03:59 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Haimar Zubeldia (Spa) Trek Factory Racing က ကပ်ရက်ပန်းဝင်ပြီး ဒုတိယ ရပါတယ်။ José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA ကတော့ 0:00:18 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။
သူတုို့ ၃ ဦးစလုံးဟာ လူ ၂၀ ကျော်ပါတဲ့ Breakaway ထဲကနေ ပန်းဝင်တဲ့ အထိ လွတ်သွား သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၅ မီနစ်ကျော်အထိ Peloton ကုို ဖြတ်ပြေးနုိုင်ခဲ့တဲ့ သူတုို့ကုို ပန်းအ၀င်မှာ ၃၈ စက္ကန့်သာလုိုတော့တဲ့အထိ အနီရောင်အုပ်စုက လုိုက်လာ နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပန်းဝင်ခါနီး နောက်ဆုံးတောင် ၂ လုံးမှာ လက်ရှိ အနီရောင်ပုိုင်ရှင် Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin ကုို ၃ စက္ကန့်ပြတ်နေတဲ့ Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က အကြိမ်ကြိမ်တုိုက်ခုိုက်ထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့ လွတ်ထွက်မသွားအောင် Dumoulin က ထိမ်းထား နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ပွဲ ပြီးတဲ့အထိ အနီရောင်အုပ်စုအတွင်း နေရာအပြောင်းအလဲ မရှိပဲ မနေ့က အတုိုင်း Tom Dumoulin (Ned) ကပဲ ဆက်ထိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Roa ကနေ Riaza အထိ 204 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲအတွင်း ကီလုို ၁၀၀ ၀န်း ကျင်မှာ ပေ ၃၀၀၀ ၀န်းကျင်တလုံးနဲ့ ပန်းဝင်ခါနီး ကီလုို ၁၉၀ မှာ ပေ ၄၀၀၀ နီးပါးမြင့်တဲ့ တောင် တလုံးအပါဝင် စုစုပေါင်း တောင် ၅ လုံးလောက်ကုို ကျော် ဖြတ်ရပါတယ်။
တာထွက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ၂၄ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု လွတ်မြောက်သွားပြီး ၅ မီနစ်ကျော်တဲ့အထိ Peloton ကုိုဖြတ်ထားနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထုံးစံအတုိုင်း ဒီ ၂၀ ကျော် ထဲမှာ အနီရောင်အကျီကုို လုနုိုင်သူ တဦးမှမပါတဲ့အတွက် Peloton က ပြန်ဖမ်းဖုို့ မကြိုးစား ခဲ့ပါဘူး။
မီတာ ၁၀၀ ၀န်းကျင်က တောင်ကုိုကျော်ပြီးနောက်ပုိုင်းမှာတော့ Aru (Ita) ရဲ့ Astana Pro Team အသင်းက ရှေ့ကုိုတက်လာပြီး Peloton ကုို ဦးဆောင် အရှိန်တင်လုိုက်ပါတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ Aru ဟာ Tom Dumoulin ကုိုဖြတ်ထားနုိုင်ဖို့ ၅ ကြိမ်ထက်မနည်းကြိုး စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တွန်က အလစ်ငုိုက်မခံပဲ တချိန်လုံးသူ့ကိုစောင့်ကြည့်၊ မီအောင် လုိုက်နုိုင်တာချည်းဖြစ်လုို့ အရူရဲ့ ဗျုဟာ ဒီနေ့ အောင်မြင်ခြင်းမရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန်နဲ့ သဖက်ခါမှာ တောင်တက်ပွဲက ဒီထက်ပုိုင်းထန်လာဘွယ်ရှိတဲ့အတွက် အနီရောင်အုပ်စုအတွင်း ပြိုင်ဆုိုင်မှု ပိုပြင်းထန်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
၁၈ ရက်တာပွဲအပြီး သုို့မဟုတ် ပန်းဝင်ဖုို့ ၃ ရက်အလိုမှာ ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေက တော့....
1 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin 73:45:13
မနက်ဖြန်မှာတော့ Medina del Campo ကနေ Ávila အထိ 185.8 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ပုိုင်း ကီလုို ၁၀၀ အထိ သိပ်မြင့်တဲ့တောင် မရှိသေးပေမဲ့ ၁၁၀ မှာ ပေ ၄၀၀၀ လောက်မြင့်တဲ့တောင်တလုံးနဲ့ ပန်းဝင်ခါနီးမှာ ပေ ၅၀၀၀ နီးပါးမြင့်တဲ့တောင်တလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရဖုို့ရှိနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးတောင်ဟာ ဒီပွဲကို အဆုံး အဖြတ်ပေးမဲ့တောင် ဖြစ်တာကြောင့် တောင်တက်ဘုရင်တွေ အထူးသဖြင့် အနီရောင် အကျီကုို လုယူဖုို့ပြင်နေသူတွေ အသားကုန် ခြေစွမ်းပြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña ၁၉ ရက်မြောက်နေ့ Alexis Gougeard အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၁၉ ရက်မြောက်နေ့ တောင်တက်ပြိုင်ပွဲမှာ Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale က 4:19:20 နာရီနဲ့ တကိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida က 0:00:40 စက္ကန့် နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal က 0:00:44 စက္ကန့်နောက်ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။
သူတုို့ ၃ ဦးစလုံးဟာ Peloton ကုို ၁၈ မီနစ်အထိ ဖြတ်ပြေုးုနုိုင်ခဲ့တဲ့ လူ ၂၀ ကျော်ပါ Breakaway အုပ်စုထဲကဖြစ်ပါတယ်။ သူတုို့ပန်းဝင်ချိန်မှာ အနီရောင် အုပ်စုက ၁၅ ကီလုိုတောင်ကျန်နေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ သူတုို့ထဲမှာ အနီရောင်အကျီကုို လုနုိုင်သူမပါခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့အတွက်လဲ အနီရောင်အကျီက အပြောင်းအလဲမရှိပဲ မနေ့က အတုိုင်း Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin ကထိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါ တယ်။ နောက်ဆုံးတောင်မှာ ပြိုင်ဖက်တွေက သူ့ဆီကနေ အနီရောင်ပြန်လု လိမ့်မယ်လုို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့ တကယ်တန်း မှာတော့ သူကတောင် မဟာပြိုင်ဖက် Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team ကုို နောက်ထပ် ၃ စက္ကန့် ထပ်ဖြတ်နုိုင် လုိုက်ပါသေးတယ်။
Medina del Campo ကနေ Ávila အထိ 185.8 km ကီလုိုမီတာပြိုင်ပွဲအတွင်း ပထမ ပုိုင်း ကီလုို ၁၀၀ အထိ သိပ်မြင့်တဲ့တောင် မရှိသေးပေမဲ့ ကီလုို ၁၁၀ မှာ ပေ ၄၀၀၀ လောက်မြင့် တဲ့တောင်တလုံးနဲ့ ပန်းဝင်ခါနီးမှာ ပေ ၅၀၀၀ နီးပါးမြင့်တဲ့တောင်တလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရဖုို့ရှိနေ ပါတယ်။
တာထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာကတည်းက ၂၄ ဦးပါ Breakaway အဖွဲ့တခု လွတ်မြောက်သွား ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် တီဗွီ ရှေ့ရောက်တဲ့အချိန် (တီဗွီက လုိုက်ဖ် စပြတဲ့အချိန်) ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၆၀ ၀န်းကျင်အလုိုမှာ Gap က ၁၆ မီနစ်ကျော်နေခဲ့ပါပြီ။ နောက်ပုိုင်းမှာ ၁၈ မီနစ်အထိတောင် ဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီအစောပုိုင်းက ပြိုလဲမှုတခုဖြစ်ခဲ့ပြီး အနီရောင်အကျီုပိုင်ရှင်နဲ့ ပြိုင် အရူတုို့ ၂ ဦးစလုံး ဒဏ်ရာအနဲငယ်စီရခဲ့တယ်လုို့သိရပါတယ်။
ပန်းဝင်ဖုို့ကီလုို ၄၀ ၀န်းကျင်အလုိုမှာ ပထမ အုပ်စုထဲကနေ Tiago Machado (Katusha) တကုိုယ်တော် စတင်ထွက်ပြေးပါတယ်။ နောက်ပုိုင်းမှာ အခု ပထမ ရသွားသူက နောက်တဦး နဲ့အတူ သူ့နဲ့လာပေါင်းပြီး ၃ ဦးတွဲ ဆက်စီးပါတယ်။ ကီလုို ၂၀ ၀န်းကျင်အလုိုမှာတော့ အရင် ဆုံးပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေကုန်ပြီးကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမ ရသွားတဲ့ Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale ဟာ အဲဒီ ကီလုို ၂၀ လောက်အလုိုကတည်းက တကုိုယ်တော်ထွက်ပြေးပြီး ဦးဆောင်စီးနင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတုို့အုပ်စုပန်းဝင်သွားပေမဲ့ အနီရောင်အုပ်စုက ၁၅ ကီလုိုတောင် ကျန်နေဆဲ။
ကီလုို ၁၀၀ အလုိုကနေစပြီး အနီရောင်ပုိုင်ရှင် Dumoulin ရဲ့ Giant-Alpecin အသင်းကနေ Peloton ကုို ဦးဆောင်စီးနင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ပန်းဝင်ဖုို့ ၅ ကီလုိုလောက်အလုိုမှာ Movistar အသင်းမှ GC သမားတဦးဖြစ်သူ Alejandro Valverde တကို်ယ်ခြေစွမ်းပြထွက်ပြေးပါတယ်။ ၁၀ စက္ကန့်နီးနီးအထိပြတ်သွားပေမဲ့ နောက်ဆုံးပန်းဝင်တောင် ရဲတုိုက်တက်ခါနီးမှာ ပြန်ဖမ်းမိ သွားပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပုိုင်း အနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင်က ရဲတုိုက်ရှေ့ အုတ်ကြမ်းလမ်းပေါ် ခြေစွမ်းပြပြီး ပြိုင် ဖက်အားလုံးကိုချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ အရူအသဲအသန်လုိုက်ပေမဲ့ ဘယ်လုိုမှ မမီတော့ပဲ ၃ စက္ကန့် ထပ်ဖြတ်ခံလုိုက်ရပါတယ်။ မနေ့ကတည်းက ၃ စက္ကန့်ပြတ်နေတာကြောင့် အခု ၆ စက္ကန့်ပြတ် သွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ပြိုင်ဖက်တွေလဲ ၅ စက္ကန့်စီလောက် ထပ်ပြတ်သွားကြ ပါတယ်။
၁၉ ရက်တာပွဲအပြီး သုို့မဟုတ် ပန်းဝင်ဖုို့ ၂ ရက်အလိုအထိ ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေ ကတော့...
10 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:07:00 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ San Lorenzo de El Escorial ကနေ Cercedilla အထိ 175.8 km ကီလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်ပွဲမှာ ပေ ၅၀၀၀ ၀န်းကျင်မြင့် တဲ့ တောင် ၄ လုံးပါတာကြောင့် တောင်တက်ဘုရင်တွေ၊ အထူးသဖြင့် အနီရောင်အကျီကို လုဖို့ပြင်နေသူတွေအတွက် နောက်ဆုံးအခွင့်ရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ။
(သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၂၀ ရက်မြောက်နေ့ တောင်တက်ပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ် သက်ပြီး...)
ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အတုိုင်း GC အုပ်စုအတွင် ဒီနေ့ အကြီးအကျယ် တုိုက်ခုိုက် မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ်။ ပထမ ဆုံးတုိုက်ခုိုက်မှုကို ပန်းဝင်ဖုို့ ၄၅ ကီလုိုဝန်းကျင်အလုို နောက်ဆုံး ဒုတိယတောင်အတက်မှာ အနီရောင်အကျီရ ဖုို့ ၆ စက္ကန့်ပြတ်နေတဲ့ Fabio Aru (Ita) Astana အသင်းက စတင်တုိုက်ခုိုက် ပါတယ်။
လက်ရှိ အနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin သိရဲ့သားနဲ့ ဘယ်လုိုမှ ကပ်မထားနုိုင်ပဲ နဲနဲလေး Gap ဖြစ်ပြီး ဟ သွားပါတယ်။ ဒါကို သိတဲ့ အရူက တရှိန်ထုိုး တင်ပြေးတဲ့အခါ ကင်တားနား၊ မာကာနဲ့ အစိမ်း ရောင်ပုိုင်ရှင် Rodriguez တုို့ကပ်ပါ လာပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သတိထားမိလုိုက်တာက အသင်းလုိုက်စုစည်းမှုနဲ့ အသင်းဖေါ်တွေရဲ့ အရေးပါမှု ပါပဲ။ အရူ ဒီလုိုထွက်ပြေးနုိုင်ဖုို့အတွက် သူရဲ့အသင်းဖေါ်တဦးက အသားကုန်ဆွဲပြီး ကူပေး လုိုက်တာပါ။ တခါ ဒီလုိုပြေးပြီး လွတ်မြောက်စအချိန်မှာ အရူဟာ သူ့အသင်းဆီသတင်းပုို့ပြီး ရှေ့မှာပြေးနေတဲ့အသင်းဖေါ်တွေကို သူ့ကုိုပြန်ကူဖုို့ အကူညီတောင်းလုိုက်ပုံရပါတယ်။
နောက်ထပ်အသင်းဖေါ် ၂ ဦးထပ်ရောက်လာတဲ့အတွက် သူ့အသင်းသားချည်း ၄ ဦးဖြစ်သွား ပါတယ်။ အဲဒီအကူအသင်းဖေါ်တွေမရောက်ခင်ကဆုိုရင် Dumoulin နဲ့ စကုိုင်းအသင်းသား တဦးပေါင်းပြိးလုိုက်လာတာ မီဖို့ ၁၀ စက္ကန့် ပဲ လုိုနေရာကနေ စက္ကန့် ၃၀ ကျော်ပြတ်အောင် ဆွဲတင်လုိုက်နုိုင်ပါတယ်။
နောက်ပုိုင်းမှာတော့ အသင်းလုိုက်စုစည်းမှုပုိုကောင်းလာပြီး ၂ မီနစ်ဝန်းကျင် အထိပြတ် အောင် Dumoulin ကုိုဖြတ်ထားနုိုင်လုိုက်ပါတယ်။ ကံဆုိုးတာကတော့ Dumoulin မှာ အသင်း ဖေါ်တဦးမှ လာမကူနုိုင်ခြင်းပါပဲ။
ဒုတိယ အသင်းဖေါ်အားကောင်းတာက Quintana ရဲ့ Movistar အသင်းပါ။ အရူတုို့ အုပ်စုထဲ မျောပြီးလုိုက်ပါလာတဲ့ ကင်တားနားဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ကီလုို ၂၀ အလုို နောက်ထပ် တောင်ကုန်း ထိပ်တခုအရောက်မှာ အသားကုန်တုိုက်ခုိုက် ထွက်ပြေးပါတယ်။ အရူတုို့အုပ်စုမလုိုက်နုိုင်ပဲ၊ (ဒါမှမဟုတ် ၃ မီနစ်တောင်ကွာနေတဲ့အတွက် လုိုက်ဖုို့မလုိုအပ်လုို့လဲဖြစ်နုိုင်ပါတယ်) Majka (Pol) Tinkoff-Saxo တဦးတည်း ကပ်ပါလာပါတယ်။
အဲဒီလုိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ကကျန်နေတဲ့ (ဒါမှမဟုတ် ကင်တားနား သတင်းပို့လုို့ ချန် နေခဲ့တဲ့) Movistar အသင်းဖေါ်တဦးက ကင်းတားနားတုို့ ၂ ဥိးကို လာကူဆွဲပေးပါတယ်။ စက္ကန့် ၂၀ လောက်ပြနေရာကနေ တမီနစ်ကျော်ပြတ်တဲ့အထိ၊ နောက်ဆုံး ရှေ့းပြေးအုပ်စုက လက်ကျန်အဖွဲ့ကုို မိတဲ့အထိ ပြေးလုိုက်နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin ဆီကနေ အနီရောင်အကျီကုို
Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က ရသွားပြိဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ကို ပြေးထွက်နုိုင်ခဲ့တဲ့
Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo နဲ့ Nairo Quintana (Col) Movistar Team တုို့လည်း တတိယ နဲ့ စတုတ္တရသွားပါတယ်။
ဒီနေ့အတွက် ပထမ ကိုတော့ Ruben Plaza (Lampre-Merida) က ရသွားပါတယ်။
VueltaaEspaña စက်ဘီးပွဲ ၂၀ ရက်မြောက်နေ့ Ruben Plaza အနုိုင်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၂၀ ရက်မြောက်နေ့ တောင်တက်ပြိုင်ပွဲမှာ Ruben Plaza (Spa) Lampre-Merida က 4:37:05 နာရီနဲ့ တကုိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Jose Goncalves (Spa) Caja Rural - Seguros RGA က 0:01:07 မီနစ်နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team က 0:01:08 မီနစ် နောက်ကျပြီး တတိယ ရပါတယ်။
သူတုို့ ၃ ဦးစလုံးဟာ တာထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်ကတည်းက လွတ်မြောက်လာတဲ့ လူ ၃၀ ကျော်ပါ Breakaway အုပ်စုထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ပထမ ရသွားတဲ့ Ruben Plaza ဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၁၁၀ ကျော်အလုို (တာထွက်ပြီး ကီလုို ၅၀ လောက် ကတည်းက) လောက်ကတည်းက Breakaway အုပ်စုထဲကနေ တကုိုယ်တော် ထပ်ထွက်ပြေးလာသူဖြစ် ပါတယ်။
အမှန်တုိုင်းဝန်ခံရရင် သူ ဒီလုို ပန်းဝင်တဲ့အထိ လွတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်လုံးဝ မထင်ခဲ့ ပါ။ ကီလုို ၁၀၀ ကျော်ကို တကို်ယ်တော်စီးပြီး အနုိုင်ရတာမျိုး မတွေ့ဖူးသေးပါ (ရှိရဲ့သားနဲ့ ကျနော် မတွေ့ ဖူးတာလည်းဖြစ်နုိုင်ပါတယ်)။ ကျနော် တီဗွီ ရှေ့စရောက်ချိန်မှာ သူ ထွက်ပြေး ကာစဖြစ်ပြီး စက္ကန့် ၄၅ လောက်ပဲ ပြတ်ပါသေးတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့တင်လာလုိုက်တာ ၂ မီနစ် ၂၀ လောက်အထိပြတ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပန်းဝင်ဖုို့က ကီလုို ၉၀ လောက် တောင်ကျန်သေးတဲ့အပြင် ပေ ၅၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ တောင် ၃ လုံးရှိသေးတယ်လေ။
ဒါပေမဲ့ သူ့နောက်ကုိုလုိုက်တဲ့ ဒုတိယ အုပ်စုဟာ အကွဲကွဲဖြစ်ပြီး အုပ်စုလုိုက် စုစည်းမှု သိပ် မရှိလှပါ။ နောက်ပုိုင်းမှာ ၄ ဦးအုပ်စုက ဒုတိယ အုပ်စုအဖြစ် စုမိသွားပြီး ကျန်တဲ့ ၃၀ ၀န်းကျင် က နောက်မှာကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖုို့အကောင်းဆုံးကတော့ အနီရောင်အုပ်စုအတွင်း အားပြိုင်မှုပါပဲ။ ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၆၀ အလုိုလောက်မှာ အနီရောင်အုပ်စုနဲ့ ရှေ့ပြေးအုပ်စုကြား Gap က ၁၀ မီနစ် ၀န်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ တောင်က ပေ ၅၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ ၂ လုံးကျန်နေပါတယ်။ အဲဒီလုို အချိန်မှာ Astana အသင်းခေါင်းဆောင် Aru က စတင်တုိုက်ခုိုက်ထွက်ပြေးပါတယ်။
ဒီလုိုထွက်ပြေုးုလုိုက်တဲ့အတွက် အနီရောင်အကျီအတွက် အကြိတ်အနယ်ပြိုင်နေကြသူ ၁၀ ဦးခန့်ပဲ ကပ်ပါလာပြီး ကျန်တဲ့ Peloton ထဲက လူ ၅၀ ကျော် ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ Aru နဲ့ Astana အသင်းရဲ့ ပထမ ထုိုးစစ်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
အဲဒီလုို ၁၀ ဦးကျော်ပါတဲ့အုပ်စုအဖြစ်စီးလာပြီး ၅ ကီလုိုဝန်းကျင်အကြာ တောင်ကုန်းထိပ် တခုကိုအတက်မှာ Aru နဲ့ Astana အသင်းက ဒုတိယ ထုိုးစစ် စ ပါတယ်။ ဒီတကြိမ်မှာတော့ သူတို့ ထုိုးစစ်ဟာ အနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin ကုို ပစ်မှတ်ထားတယ်ဆုိုတာ ထင်ရှားလှပါတယ်။
Astana အသင်းဖေါ်တဦးက ရှေ့ကနေ အသားကုန်ဆွဲပြီး သူကုန်တာနဲ့ အရူကုို တင်ပေးလုိုက် ပါတယ်။ အရူတခါ အသားကုန် ထပ်တင်တဲ့အခါမှာတော့ Tom Dumoulin ဘယ်လုိုမှ ကပ် မထားနုိုင်တော့ပဲ စက်ဘီးတစီးစာလောက် Gap နဲနဲဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကိုအသေအချာ လှည့်ကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ အရူဟာ အသားကုန်တင်ပါတော့တယ်။
၆ စက္ကန့်သာကွာတဲ့ ထိပ်သီး ၂ ဦးကြား ဒီလုိုပွဲကောင်းနေစဉ်မှာ အရူနောက်ဘီးကို မီအောင် လုိုက်ကပ်နုိုင်သူတွေကတော့ GC တတိယကနေ နံပတ် ၆ နေရာကြားရှိနေသူတွေဖြစ်တဲ့ Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:01:24, Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 0:02:31 နဲ့ Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:03:02 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
.... (ကင်တားနား ထပ်ထွက်ပြေးတာကိုတော့ ရှေ့မှာတင်ပြထားတဲ့ အသင်းလုိုက်နဲ့ အသင်း ဖေါ်မှာ ဆက်ဖတ်ရန်...)။
လက်ရှိ အနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Tom Dumoulin ဟာ ပန်းဝင်ချိန် ၅ မီနစ်လောက်အထိ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် အနီရောင်ကနေ နံပတ် ၆ အထိကျဆင်းသွားပါတယ်။ ၂၀ ရက်နေ့ အပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေကတော့ ...
10 Luis Mientjes (RSA) MTN-Qhubeka 0:10:46 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Alcalá de Henares ကနေ Madrid အထိ 98.8 km ကိလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြဖုို့ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးနေ့တွေရဲ့ ထုံးစံအရ အကြိတ် အနယ်စီးလေ့မရှိတော့ပဲ အလှပြသာစီးတော့တဲ့အတွက် အနီရောင်အကျီကုို Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team ရတာ သေချာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဘီးအသင်းဟာ ဘော်လုံးအသင်း လုိုမျိုး အသင်းလုိုက်ကစားရတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးလုို့ပြောနုိုင်ပေမဲ့ ဒီနေ့ပွဲကုို အသေအချာလေ့လာ မယ်ဆုိုရင် အသင်းလုိုက်စုစည်းမှုနဲ့ အသင်းဖေါ်တွေရဲ့ အရေးပါပုံကို အပီအပြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña စက်ဘီးပွဲ ၂၀ ရက်မြောက်နေ့ Aru အနီရောင်အကျီ ပြန်ရ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်း ပနေတဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၂၀ ရက်မြောက်နေ့ တောင် တက်ပြိုင်ပွဲမှာ Ruben Plaza (Spa) Lampre-Merida က 4:37:05 နာရီနဲ့ တကုိုယ်တော် ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူတုို့ ၃ ဦးစလုံးဟာ တာထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်ကတည်းက လွတ်မြောက်လာ တဲ့ လူ ၃၀ ကျော်ပါ Breakaway အုပ်စုထဲကဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ပထမ ရသွားတဲ့ Ruben Plaza ဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၁၁၀ ကျော်အလုို (တာထွက်ပြီး ကီလုို ၅၀ လောက် ကတည်းက) လောက်ကတည်းက Breakaway အုပ်စုထဲကနေ တကုိုယ်တော် ထပ်ထွက်ပြေးလာသူဖြစ် ပါတယ်။
အမှန်တုိုင်းဝန်ခံရရင် သူ ဒီလုို ပန်းဝင်တဲ့အထိ လွတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် လုံးဝ မထင်ခဲ့ ပါ။ ကီလုို ၁၀၀ ကျော်ကို တကို်ယ်တော်စီးပြီး အနုိုင်ရတာမျိုး မတွေ့ဖူးသေးပါ။ တီဗွီ ရှေ့ စရောက်ချိန်မှာ သူ ထွက်ပြေး ကာစဖြစ်ပြီး စက္ကန့် ၄၅ လောက်ပဲ ပြတ်ပါသေးတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့တင်လာလုိုက်တာ ၂ မီနစ် ၂၀ လောက်အထိပြတ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပန်းဝင်ဖုို့က ကီလုို ၉၀ လောက် တောင်ကျန်သေးတဲ့အပြင် ပေ ၅၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ တောင် ၃ လုံး ရှိသေးတယ်လေ။
... အနီရောင်အုပ်စုတွင်းက အားပြိုင်ပွဲ...
ဒီနေ့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖုို့အကောင်းဆုံးကတော့ အနီရောင်အုပ်စုအတွင်း အားပြိုင်မှုပါပဲ။ ပန်းဝင်ဖုို့ ကီလုို ၆၀ အလုိုလောက်မှာ အနီရောင်အုပ်စုနဲ့ ရှေ့ပြေးအုပ်စုကြား Gap က ၁၀ မီနစ်ကျော်ကျော် ရှိနေပါတယ်။ တောင်က ပေ ၅၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ ၂ လုံးကျန်နေပါတယ်။ အဲဒီလုို အချိန်မှာ Astana အသင်းခေါင်းဆောင် Aru က စတင်တုိုက်ခုိုက်ထွက်ပြေးပါတယ်။
ဒီလုိုထွက်ပြေုးုလုိုက်တဲ့အတွက် အနီရောင်အကျီအတွက် အကြိတ်အနယ် ပြိုင်နေကြသူ ၁၀ ဦးခန့်ပဲ ကပ်ပါလာပြီး ကျန်တဲ့ Peloton ထဲက လူ ၅၀ ကျော် ပြတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ Aru နဲ့ Astana အသင်းရဲ့ ပထမ ထုိုးစစ်ဖြစ်ပုံရ ပါတယ်။
၆ စက္ကန့်သာကွာတဲ့ ထိပ်သီး ၂ ဦးကြား ဒီလုိုပွဲကောင်းနေစဉ်မှာ အရူရဲ့ နောက်ဘီးကို မီအောင် လုိုက်ကပ်နုိုင်သူတွေကတော့ GC တတိယကနေ နံပတ် ၆ နေရာကြားရှိနေသူတွေဖြစ်တဲ့ Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:01:24, Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 0:02:31 နဲ့ Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:03:02 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
.... အသင်းလုိုက်စုစည်းမှုနဲ့ အသင်းဖေါ်အရေးပါပုံ...
ဒီနေရာမှာ သတိထားမိလုိုက်တာက အသင်းလုိုက်စုစည်းမှုနဲ့ အသင်းဖေါ်တွေရဲ့ အရေးပါမှု ပါပဲ။ အရူ ဒီလုိုထွက်ပြေးနုိုင်ဖုို့အတွက် သူရဲ့အသင်းဖေါ်တဦးက အသားကုန်ဆွဲပြီး ကူပေး လုိုက်တာပါ။ တခါ ဒီလုိုပြေးပြီး လွတ်မြောက်စ အချိန်မှာ အရူဟာ သူ့အသင်းဆီသတင်းပုို့ပြီး ရှေ့မှာပြေးနေတဲ့ အသင်းဖေါ် တွေကို သူ့ကုိုပြန်ကူဖုို့ အကူညီတောင်းလုိုက်ပုံရပါတယ်။
နောက်ပုိုင်းမှာတော့ အသင်းလုိုက်စုစည်းမှုပုိုကောင်းလာပြီး ၂ မီနစ်ဝန်းကျင် အထိပြတ် အောင် Dumoulin ကုိုဖြတ်ထားနုိုင်လုိုက်ပါတယ်။
ကံဆုိုးတာကတော့ Dumoulin မှာ အသင်း ဖေါ်တဦးမှ လာမကူနုိုင်ခြင်းပါပဲ။ မနေ့ကရော၊ ဒီနေ့ပထမပုိုင်းမှာပါ Tom Dumoulin (Ned) ရဲ့ Team Giant-Alpecin အသင်းက Peloton ကုိုဦးဆောင်စီးနုိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီလုို အကျင်းအကျပ် ဖြစ်လာရင် ဘယ်လုိုလုပ်မလဲဆုိုတာ ပြင်ဆင်ထားပုံမရပါဘူး။ အသင်းဖေါ် တဦးမှ မကူနုိုင်လုို့ ဒီလုိုပုံပျက်ပန်းပျက်ကျန်ခဲ့ရတာပါ။
ဒုတိယ အသင်းဖေါ်အားကောင်းတာက Quintana ရဲ့ Movistar အသင်းပါ။ အရူတုို့ အုပ်စုထဲ မျောပြီးလုိုက်ပါလာတဲ့ ကင်တားနားဟာ ပန်းဝင်ဖုို့ကီလုို ၂၀ အလုို နောက်ထပ် တောင်ကုန်း ထိပ်တခုအရောက်မှာ အသားကုန်တုိုက်ခုိုက် ထွက်ပြေးပါတယ်။ အရူတုို့အုပ်စုမလုိုက်နုိုင်ပဲ၊ (ဒါမှမဟုတ် ၃ မီနစ်တောင်ကွာ နေတဲ့အတွက် လုိုက်ဖုို့မလုိုအပ်လုို့လဲဖြစ်နုိုင်ပါတယ်) Majka (Pol) Tinkoff-Saxo တဦးတည်း ကပ်ပါလာပါတယ်။
အဲဒီလုိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ကကျန်နေတဲ့ (ဒါမှမဟုတ် ကင်တားနား သတင်းပို့လုို့ ချန် နေခဲ့တဲ့) Movistar အသင်းဖေါ် တဦးက ကင်းတားနားတုို့ ၂ ဥိးကို လာကူဆွဲပေးပါတယ်။ စက္ကန့် ၂၀ လောက် ပြတ်နေရာကနေ တမီနစ်ကျော်ပြတ်တဲ့အထိ၊ နောက်ဆုံး ရှေ့းပြေးအုပ်စုက လက်ကျန်အဖွဲ့ကုို မိတဲ့အထိ ပြေးလုိုက်နုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin ဆီကနေ အနီရောင်အကျီကုို Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က ရသွားပြိဖြစ် ပါတယ်။ ရှေ့ကို ပြေးထွက်နုိုင်ခဲ့တဲ့ Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo နဲ့ Nairo Quintana (Col) Movistar Team တုို့လည်း တတိယ နဲ့ စတုတ္တရ သွားပါတယ်။
လက်ရှိ အနီရောင်အကျီပုိုင်ရှင် Tom Dumoulin ဟာ ပန်းဝင်ချိန် ၅ မီနစ် လောက်အထိ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် အနီရောင်ကနေ နံပတ် ၆ အထိ ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ၂၀ ရက်နေ့ အပြီး ၁-၁၀ ရထားတဲ့ GC သမားတွေ ကတော့ ...
10 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:10:46 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာတော့ Alcalá de Henares ကနေ Madrid အထိ 98.8 km ကိလုိုမီတာကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကြဖုို့ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ ပွဲတွေရဲ့ ထုံးစံအရ အကြိတ် အနယ်စီးလေ့မရှိတော့ပဲ အလှပြသာစီးတော့တဲ့ အတွက် အနီရောင်အကျီကုို Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team ရတာ သေချာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယကနေ စတုတ္တ အထိ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားမှာတော့ Gap က တစက္ကန့်စီသာကွာတဲ့အတွက် အကြိတ်အနယ် ထ ပြိုင်ကြဦးမလားဆုိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
စက်ဘီးအသင်းဟာ ဘော်လုံးအသင်းလုိုမျိုး တဖက် ၁၁ ဦးစီ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရတဲ့ အားကစား မျိုးမဟုတ်လုို့ အသင်းလုိုက်ကစားရပုံ၊ အသင်းလုိုက်အရေးပါပုံကုို ပရိသတ်တွေ သိပ်အလေး မထားမိကြပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ပွဲကုို အသေအချာလေ့လာမယ်ဆုိုရင် အသင်းလုိုက်စုစည်းမှုနဲ့ အသင်းဖေါ်တွေရဲ့ အရေးပါပုံကို စက်ဘီးအားကစားက အပီအပြင်ဖေါ်ပြသွားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
VueltaaEspaña စက်ဘီးပွဲ ၂၁ ရက်ပေါင်း Fabio AruAru အနီရောင်အကျီ ရသွားပြီ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်အထိ ၂၁ ရက်ကြာ ကျင်း ပခဲ့တဲ့ စပိန်နုိုင်ငံတပတ် VueltaaEspaña ပွဲရဲ့ ၂၁ ရက်မြောက်နေ့၊ နောက် ဆုံးနေ့ မက်ဒရစ်မြို့ပတ်ပြိုင်ပွဲမှာ တာတုိုဘုရင် John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin က 2:34:13 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Danny Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing နဲ့
Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team တုို့က နှာတဖျားစီ နောက်ကျပြီး ဒုတိယနဲ့ တတိယ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အနီရောင်အကျီကတော့ အပြောင်းအလဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ မနေ့က အစီရင်ခံ ခဲ့တဲ့အတုိုင်း Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team က 85:36:13 နာရီနဲ့ ရ သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒု-တ-စ ၃ ဦးဟာ တစက္ကန့်စီသာကွာတဲ့အတွက် ဒီနေ့ အကြိတ်အနယ်များ ထပ်ပြိုင်မလားဆုိုပြီးထင်ခဲ့ပေမဲ့ အစဉ်အလာကိုချိုးဖောက်ပြီး နောက်ဆုံးနေ့ မှာ (GC သမားတွေထဲက) ဘယ်သူမှ အသဲအသန်စီးလေ့မရှိပါ။
နှမျောဖုို့ကောင်းတာကတော့ အနီရောင်ကုို ရထားပြီးမှ ပြန်စွန့်လုိုက်ရတဲ့အပြင် နံပတ် ၆ အထိတောင်ကျသွားခဲ့ရတဲ့ Tom Dumoulin (Ned) Team Giant - Alpecin ပါပဲ။ မနေ့ကအစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတုိုင်း အသင်းလုိုက်စုစည်းမှုနဲ့ အသင်း ဖေါ်တွေရဲ့အရေးပါပုံကို ရှေ့ပွဲတွေမှာ Team Giant - Alpecin က အသေချာ ပြင်နုိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ သူတုို့အသင်းက တာ တုိုဘုရင် John Degenkolb (Ger) ပထမ ရသွားတာကြောင့် စိတ်ဖြေရာ တော့ ရသွားခဲ့ပါတယ်။
တစက္ကန်အပြတ်နဲ့ စတုတ္တဖြစ်သွားလုို့ စင်ပေါ်မတက်လုိုက်ရသူ Nairo Quintana (Col) Movistar Team အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ခြေချော်လက်ချောဖြစ်သွားသူအများစုဟာ လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ အတွက် လာမဲ့ပွဲတွေမှာ သူတုို့ရဲ့ ခြေစွမ်းတွေကို ပြန်မြင်ရဖုို့ မျှော်လင့်ထား ပါတယ်။
၂၁- ရက်အပြီး ၁-၁၀ ရသွားတဲ့ GC သမားတွေကတော့...
1 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 85:36:13
2 Joaquim Rodríguez (Spa) Team Katusha 0:00:57
3 Rafał Majka (Pol) Tinkoff - Saxo 0:01:09
5 Johan Esteban Chaves (Col) Orica GreenEDGE 0:03:10
6 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant - Alpecin 0:03:46
9 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha 0:07:12
10 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:10:26 တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
၂၁ ရက်ကြာပွဲကြီးတခုပြီးသွားပြီမုို့ ခေတ္တနားပါဦးမယ်။
လောလောဆယ် ကနေဒါနုိုင်ငံက မွန်ထရီရယ်မြို့မှာ the Grand Prix Cycliste de Montréalde 2015 နုိုင်ငံတကာပွဲတခုကျင်းပနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မုိုးတွေ တအားရွာ နေလုို့ TV က Live မပြနုိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီပွဲပြီးရင်တော့ UCI Road World Championships 2015 ပွဲ ကုို September 20 ကနေ 27 အထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Richmond, VA (Virginia) ပြည်နယ်မှာ စတင်ဖုို့ရှိနေ ပါတယ်။ စပိန်ပွဲ၊ ပြင်သစ်ပွဲ၊ အီတလီ ပွဲနဲ့ အခြားပွဲအသီးသီးမှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ စက်ဘီးသမား အားလုံးနီးပါး နုိုင်ငံ အလုိုက် ကုိုယ်စားပြု ၀င်ပြိုင်ကြမှာမုို့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းတခု မကြာခင် ထပ်မံ ရှု စားရဖုို့ရှိပါကြောင်း ကြိုတင်အစီရင်ခံလုိုက်ရပါတယ်။ ။
အပစ်ရပ်ပြီးမှ အပြတ်ရစ်ကြရမဲ့ သဘောလား